Mvura yekutanga nemvura yekupedzisira zvinomiririra chii?
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Mvura yekutanga nemvura yekupedzisira zvinomiririra chii?
Mvura yekutanga nemvura yekupedzisira zvinomiririra chii?
Izwi rakashandiswa muchiHeberu remvura yekutanga (mo-reh’, pronounced mowreh) rinokwanisawo kureva kuti mufundisi kana mudzidzisi zvichibva mumagwaro eStrong’s Exhaustive Concordance. Mvura yedzidziso kana mvura yekutanga.
Mwari akatumira muprofita kuti atidzosere pakutenda kwekereke yeTestamente Itsva yekutanga yakaitwa nevapostora. Dzidziso dzake dzinotidzorera kuBhaibheri.
Pane chirevo chakadzama pamusoro pemvura yekutanga kana kuti “yedzidziso”. Zvinoreva kuti kuvandudzwa kudzoserwa padzidziso nekutenda kwekereke yekutanga.
Asi Judasi aive pakati pevadzidzi vakafamba naJesu. Saka Mwari paanofamba, ipapo mweya waantikristu wemutasvi webhiza jena, murume wemunondo kana kuti mutakuru weChisimbiso chekutanga chinomiririra hunyengeri hwechitendero, unobva vasimukawo.
Mweya Mutsvene waMwari nemweya waSatani yakavharirwa muhondo huru kwazvo pahondo dzose dzakamborwiwa pamusoro pekutonga kuti pfungwa dzemaKristu ekereke yekupedzisira dzinofunga sei uye kuti nheyo dzesimba rezvemweya dziri papi. Mutungamiri wedu iBhaibheri Shoko rakanyorwa here sevatendi vakatenda mukereke yekutanga, kana kuti mashoko akabatwa paitaura Hama Branham sekuturikirwa kwaanoitwa nevafundisi vemasangano eMharidzo nenzira dzavo zhinji dzinorwisana.
Hondo inobva yatanga.
Kune rumwe rutivi kune ruzivo rwevanhu rwakachenjera rwevafundisi vavo vanoziva asi vanotonga vanoturikira mashoko avakabata paitaurwa vachiedza nepavanogona napo kusvibisa zita rehama Branham nekutora zvaakataura sezvakanaka zvose pasina chakakanganiswa saka nekudaro zvakaenzana, kana zvisina kutokunda, zvinotaurwa neMagwaro. Mufundzisi wega-wega ndiye mukuru asingatadzi wekereke yake inozviwisira pasi pake. Vanhu mukereke mavo vanoedza nepavanokwanisa kuita uye kuteerera zvese zvavanoudzwa kuti vafunge nevafundisi vavo. They ignore the numerous different beliefs that exist amongst the highly fragmented Message churches. Each is deluded by the conviction that only their pastor is right. Vanosimudzira vafundisi vavo senhengo dzechiprista chikuru chiri pakati paJesu navo. Kuteerera kwemapofu, vasingafungi nezvavo, vachingotevedzera zvavakanzwa zvichitaurwa, vachienda kumakereke evafundisi Svondo yega-yega ndiyo tariro yavo huru mukufadza Mwari “sevatendi veMharidzo” vakanaka vanoda kwazvo kutevera hutungamiri hwemunhu, pachinzvimbo chekutevera Magwaro. Vanosiya kutarisa chikonzero chekutenda kwakasiyana siyana kuri mumakereke eMharidzo mazhinji apatsanurana zvakanyanya. Mumwe nemumwe wavo anotonda mukunyengerwa kwavo pakunzi mufundisi wavo chete ndiye akanaka anotaura chokwadi.
Kune rumwe rutivi kune vanhu vakazvimiririra vanoda kufunga nenzira yakasiyana, vanoisa kutenda kwavo muShoko raMwari rakanyorwa muBhaibheri pavanotsigira zaruriro yehama Branham nenzira iyi zvinobva zvaburitsa mavhesi akasiyana siyana ari muBhaibheri pamusoro penyaya inenge ichitaurwa. Vanhu ava vane rudo rwakadzama naIshe Jesu Kristu, zvinoita kuti vapikise munhu ega ega anoda kuuya pakati pavo naJesu. Vanotsvaga chiitiko chepagomo rekubwinya, apo chero munhu mukuru akaita saEria anonyangarika pahuvepo hwaJusu. Vanoda kuona Jesu chete, kunyange vachida Eria kuti avaratidze Jesu. Vanovimba nehukama huri pakati pavo ivo naJesu, uye havagoni (uye havazogona) kutenda mune chimwe chinhu kunze kwekunge chatsigirwa nemavhesi emuMagwaro. Mavhesi avakanzwisisa zvichibva pazaruriro yehama Branham. Havatendi muhutungamiri hwemunhu mumwechete mukereke. Vakaona chimiro “chekutapwa kwekereke” apo vafundisi vaiuya vamwe vafundisi vachienda muchiitiko chisina magumo chehutungamiri hwevanhu nerudo rwavo rwemari nesimba.
Chinhu chikuru chiri papfungwa yekuti “mufundisi ndiye musoro wekereke” chichipikisana nechekuti “Bhaibheri haritauri izvozvo. Bhaibheri rinoti Kristu ndiye musoro wekereke”. Iyi ndiyo nhungo inomira yakasimbisa chokwadi nekutadza. Kusarudza munhu semusoro wekereke yenyu zvinongoreva kuti saBerishazari, uri kupimwa pachikero wowanikwa uri pakuda kugadziriswa.
MAPISAREMA 23:1 Jehovha ndiye mufudzi wangu; Hapana chandingashaiwa.
Zvichibva muBhaibheri, Jesu ndiye Musoro wekereke, kwete mumwewo munhu zvake.
Jesu ndiye Mufudzi. Magwaro haape basa iri kune umwe munhu kana mumwechete zvake. Basa remufudzi, anofudza nekupa makwai zvekudya, rakapihwa kuvatariri veungano pazvimbo yega-yega.
Asi hakuna Magwaro anoti mufundisi ndiye musoro wekereke. Hakuna Magwaro anoti kune munhu mumwechete anofudza makwai, munhu uyu anofanira kuva pasita watinoti mufundisi.
I PETRO 5:1 Naizvozvo ndinoraira vakuru pakati penyu,
2 Fudzai boka raMwari riri pakati penyu,
Bhaibheri rinoti Kristu, Shoko raMwari, ndiye Musoro wekereke. Ndiye Mufudzi wenyu. Mwari anoda vakuru kuti vafudze boka. Kufudza boka ibasa remufudzi. Saka chikwata chevakuru ndicho chinozadzisa basa remufudzi.
Asi pano pane mashoko akabatwa paitaura vanhu akasiyana kwazvo.
61-0425B KUZARA KWEHUMWARI KUNOTSANANGURWA
Nekuti ndinotenda kuti zviri muchipostora, nekuti musoro, chigaro chepamusoro-soro mukereke ndiye mufudzi; tinoona izvozvo: mufundisi.
58-10 MARONGERWO EKEREKE
Zvino kumufundisi, kuhama yedu Neville, panguva ino. Rangarirai, ndiye musoro wekereke wakazara.
Uyu ndiwo mutsetse wekupatsanura. Mamwe mazwi akabatwa paitaurwa anoti mufundisi ndiye musoro wekereke.
Asi kwete ese.
57-0908M VAHEBERU CHITSAUKO CHECHISHANU NECHECHITANHATU
Ndiratidzei neBhaibheri kuti chii chikuru, muBhaibheri, kukunda mukuru mukereke panzvimbo?
Parizvino munofanira kusarudza pakati peMagwaro nemamwe mazwi akataurwa kakabatwa akasarudzika.
Ndizvo zvimwe zvinobatwa nemvura yekutanga kana kuti yedzidziso apo inotigadzirira kuti tigosvika panguva yegoho. Mukuru wedu iBhaibheri here, kana kuti mazwi akabatwa paiturwa?
Zvino mirai muone.
Makereke eMharidzo, ari pasi pehutungamiri hwevanhu vafundisi, akaparadzana kuita masangano mazhinji. Saka munoziva sei kuti nderipi sangano rine chokwadi? Kana mukakwanisa kuwana sangano rimwechete reMharidzo rine chokwadi, ipapo mamwe masangano ese anenge asina chokwadi. Vafundisi ivavo vese vanenge varasisa vanhu vanovatevera. Saka muri kure zvakadii pamunovimba nevafundisi venyu?
MAPISAREMA 118:8 Zviri nani kutizira kuna Jehovha Pakuvimba nomunhu
JEREMIA 17:5 Zvanzi naJehovha, "Ngaatukwe iye munhu unovimba nomumwe munhu, unoita nyama yomunhu ruoko rwake, unomoyo unotsauka kuna Jehovha
Rangariraiwo zvakare kuti kutaura kwehama Branham hakunganzi hakuna pakatadzikwa.
Mwari akamupa zviratidzo zvinomwe. Chekupedzisira chaive pamusoro peAmerica ichiparadzwa. Akabva afungidzira kuti izvi zvichaitika muna 1977. Asi America haina kuparadzwa muna 1977 zvisinei nekuita fungidziro dzegore kwaakaita.
60-1113 KURAIRWA NEKUMIRIRIRWA
Zvino ndakaona United State sechinhu chimwechete, iri nzvimbo yakapiswa zvakazara. Izvi zvichave pedyo nemagumo. (Zvino ndinazvo mundangariro dzangu: “Ndinofungidzira kuti izvi zvichaitika muna ..... gore ra 1977 risati rasvika.”)
60-1205 NGUVA YEKEREKE YEEFESO
Uye muna 1906 nguva yekereke yeRaodikia yakatanga, uye handizivi kuti ichaguma rini, asi ndinofungidzira kuti zvichave mugore 1977.
Asi ipapo akabva awedzera neyambiro.
1963 BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE KEREKE YERAODIKIA
…. 1977 rinoita serichabvisa zviitiko zvenyika rogamuchira mireniyamu.
... Zvino, ndinokwanisa kukanganisa gore iroro, ndokwanisa kukanganisa nemakore makumi maviri, kana kuti nemakore zana.
Saka kutaura uku kwakabva kwabvisa kutaura kwefungidziro kwaakatanga kuita kukaita kuti kutaura kwekutanga kushaiwe basa.
Asi izvi hazvina kumisa kutorwa kwakaitwa 1977 segore raizouya Ishe nevatendi vazhinji veMharidzo mumazuva iwayo. Izvozvo vamwe vakaparidza 1977 segore rekuuya kwaShe asi vanoramba kuti vakazviita.
Saka hazvina kunaka kuvaka dzidziso kubva pamashoko akabatwa paitaura vanhu, sezvo kutaura kumwechete kunokwanisa kusiyana nekumwe.
Taritai kuti izwi raive kupi, Kutinhira. Kwete kudenga; panyika! Kutinhira hakuna kubvira kwareva kubva kudenga. Kwakareva kubva panyika.
Kutinhira kunomwe kudenga kuchazivisa chakavanzika ichi. Zvichave zviri pakuuya kwaKristu, nekuti Kristu akati hakuna anoziva paachauya zvakare.
Kutinhira kunomwe kunoreva kubva Kudenga here kana kuti pano panyika? Hatikwanisi kudaira izvi kubva pakutaura kuviri uku.
Mashoko akataurwa nevanhu akakosha chete kana achizivisa vhesi remuBhaibheri. Haana nheyo pachawo.
I VAKORINTE 3:10 Nenyasha dzaMwari dzandakapiwa, ndakaronga nheyo somuvaki wakachenjera; mumwe unovaka pamusoro padzo. Zvino mumwe nomumwe ngaachenjere kuti unovaka sei pamusoro padzo.
11 Nokuti hakunomumwe ungaronga dzimwe nheyo, asi idzo dzakarongwa kare, ndiye Jesu Kristu
Pauro akaronga nheyo, kwete hama Branham. Tinofanira kuvakira paNheyo dzeMagwaro aya. Hama Branham vanotidzosera ipapo.
Gore guru rakatorwa mifananidzo pamusoro peFlagstaff, mamaira 200 kumusoro kwenzvimbo kwaive nehama Branham kuTucson musi wa 28 Kukadzi 1963. Gore guru iri harina kubvira raburuka pasi kana kuenda kumakomo eSunset Peak, kwakazoenda hama Branham kunovhima mazuva matanhatu akazotevera, anongova mamaira makumi mana kubva paTucson. Gore rakaramba riri pachinhambwe chemamaira 43 mudenga kwemaminetsi 28 paraionekwa, richibva kumadokero richienda kumavirira rakananga kuNew Mexco.
Gore guru rakaonekwa nguva dzemadeuka zuva. Vatumwa vanomwe vakashanyira hama Branham mangwanani nguva dzakapoteredza dzesere vakabva vabva kwavari. Saka nguva dzavo dzaive dzisiriidzo zuva zvese nenzvimbo, kana gore rakaitwa musi wakashanya vatumwa vanomwe kwaari.
Akazosvika kunzvimbo yekuvhima pedyo neSunset Peak musi wa 6 Kurume 1963. Vatumwa vakasvika kwaari mumashure memazuva maviri, waive musi wechisere mumashure mekuonekwa kwegore.
Pavakabva kwaari hapana Gore rakaitwa sezvo pasina gore rakatorwa mifananidzo.
Saka hama Branham vakakanganisa zvese zvavakataura pamusoro peizvi. Vaive munhu vakakanganisawo, vaive vasiri Mwari, kana kuti Izwi raMwari. Musati mamumhura kuti akakanganisa, regai munhu asati ambotadza akande ibwe rekutanga.
Asi Mwari pano anotipa yambiro huru kwazvo. Hama Branham vakazivisa zvakavanzika zvemuBhaibheri zvakanakisa asi pakava nenguva dzavaimbotadza pavaitaura. Kukanganisa uku kwaive kwakakosha kuti kutaridze kuti aive munhu anokanganisawo, uye kuti kuratidze kuti aive asina kufanana naMwari. Saka tarisisai zvaakataura zvakanaka muchienzanisa nezvinhu zvechokwadi chaizvo uye neBhaibheri musati matenda mazviri. Tine yambiro yedu: haasi ese mazwi anobatwa panotaurwa echokwadi.
Eksodo yekutanga aive maJuda achibuda muEgipita. Eksodo yechipiri yaive kereke ichibuda mumaJuda. Eksodo yechitatu ndepachabuda Mwenga waKristu mukereke.
Saka chikamu chakaoma kwazvo paeksodo yechitatu ihondo pakati “pezwi remutumwa wechinomwe” rinonzi neBhaibheri aive hama Branham, “neNzwi raMwari” risingatadzi risina kubvira ravimbiswa kumazuva edu, asi rinonzi nevafundisi vemakereke eMharidzo ndeimwe nhanho vakatarisana nechinangwa chavo chekusimbisa simba ravo pamusoro pevanhu nekuenzanisa William Branham naMwari. Vanoba vataura kuti mufundisi ega ndiye anokwanisa kuturikira zvaakataura zvakanaka.
Zvakare munofanira kusarudza.
Hama Branham vaive mutumwa wechinomwe here, nyeredzi muruvoko rwaJesu rwerudyi, KANA KUTI vaive Mwari airatidzwa panyama?
Munofanira kuongororesa mhinduro yenyu.
Ramangwana renyu rese seMwenga waKristu kana kuti sevasikana vakapusa zvinobva pamhinduro iyoyo.
Asi vasikana vakapusa vachapinda munguva yeKutambudzika kukuru matinorasikirwa neruponeso kana tikatora chiratidzo chechikara. Ichi chinhu chinotyisa zvikuru.
Uku hakusi kuponeswa kubva kugehena. Uku kuponeswa kubva kunguva yeKutambudzika kukuru. Nei zvanzi kutya nekudedera? Nekuti muchafanira kusatenderana nevafundisi venyu nehama dzenyu dzepedyo mukereke.
Vatumwa vanomwe vakauya kuhama Branham musi wa 6 Kurume 1963 panzvimbo dzegomo reSunset Peak neRattlesnake mesa murenje riri pedyo neTucson, Arizona kuti vamupe basa rekutanga eksodo yechitatu yekuburitsa Mwenga kubva mukereke. Bato raakatanga iri rakadaidzwa kunzi “Mharidzo” (the Massage). Akadzokera kuJeffersonville kwaakaziviswa zvakavanzika zveZvisimbiso zvinomwe. Chokwadi chezvakavanzika ichi chakamugonesa kuzivisa kuMwenga zvakavanzika zvese zvakavanzwa muBhaibheri zvakarasika muNguva yeRima uye zvisina kugona kugadziriswa nevamutsiridzi venguva yakadarika vakaita saLuther, Wesley uye vePentecositi.
Paakazivisa zvakavanzika zveMagwaro zvakadzama kwatiri, tinozviwana tiri pasi pekurudziro yeChiedza chenguva dzemadeuka zuva (madeko) dzekutenda kwekereke yekutanga
Nemafungiro ehudzvanyiriri uye ekumanikidza vanhu kutenda zvinodiwa nemunhu mumwe, zvaisazivikanwa nekereke yekutanga, anosvibisa kutenda kwedu kweBhaibheri sekuruma kwechiva (rudzi rwenyoka).
Ndivanani vanodaidzwa kunzi nyoka?
Makereke emasangano ari kure kwazvo kubva pachiyero chekuziva kuti anomiririra kuipa mukuedza kwavo kun’oresa chokwadi. Kukanganisa kwavo kuri pachena zvekuti havangakwanisi kutinyengedza.
Asi vavengi vakachenjera vanokunda kun’oresa vatendi veMharidzo kubva pakudzokera kuchokwadi cheBhaibheri ndivanani?
Johane Mubapatidzi, mumazuva eeksodo yechipiri apo kereke yakabuda muvaJuda, akadaidza vakuru vechitendero venguva yake kuti vana venyoka. Vese zvavo.
MATEO 3:7 Asi wakati achivona vazhinji vavaFarise navaSadhuse vachivuya kuzobapatidzwa naye, akati kwavari vana venyoka, ndianiko wakakunyeverai kuti mutize kutsamwa kunovuya?
Saka kana kuita uku kukadz0korora nhasi uno, vakuru vezvitendero mumazuva eeksodo yechitatu, vakawanda vacho vafundisi vemakereke eMharidzo, ndivo vachawanikwa vari vavengi vakuru vechokwadi. Ichi chinhu chinosuwisa kwazvo. Asi rangarirai Judasi - aive pachinzvimbo chepamusoro-soro.
Nyoka ine huturu mumuromo mayo. Mufundisi anodzidzisa chero chinhu chinorwisa Magwaro kana anoramba rimwe Gwaro anenge achirega chefu kana huturu hunouraya huchibuda mumuromo make.
Kubudirira kwakangwara asi kwakaipisisa kwaSatani kwaive kukurudzira vanhu kuita mashoko akataurwa nevamwe vatauri mukuru wavo.
Chiratidzo chechikara chinoyanana ne Vicarius Filii Dei, zvinoreva kuti “ pachinzvombo cheMwanakomana waMwari”.
Saka nhasi uno vafundisi veMharidzo vakakwidziridza mashoko akataurwa nehama Branham kuaisa “pachinzvimbo cheShoko raMwari” semukuru wavo.
JOBO 15:15 Tarira, haatendi vatsvene vake; Zvirokwazvo, kudenga hakuna kunaka pamberi pake.
JEREMIA 10:23 Haiwa, Jehovha, ndinoziva kuti nzira yomunhu haizi yake amene; munhu, unofamba, haagoni kururamisa nhano dzake.
Munokwanisa chete kutarisira kumunhu kana mabvisa maziso enyu panaMwari.
Murume wevuta akatanga sei kunyengera?
JEREMIA 9:8 Marimi avo miseve inouraya, anoreva zvinonyengera; munhu unoreva zvorugare kuno wokwake nomuromo wake, asi mumoyo make unovandira.
Huturu pasi perurimi. Zvakangofanana nenyoka.
Murume wevuta kunaZvakazarurwa Chitsauko 6 haana kutsanangurwa achinzi aive nemuseve. Haana basa nekuita chero umwechete. Nhema dzinobuda mumuromo make paanoparidza dzidziso yake yenhema dzauraya vanhu vazhinji pamweya kukunda zvinokwanisa kuitwa nemuseve chaiwo.
Vakuru vemakereke vanotida kana takanyengerwa zvakakwana zvekutenderana nekuturikira kwavo mazwi akabatwa. Asi rudo urwu kunyengera kwega. Munozokwanisa kuona izvi kana mukatanga kurwisa kutenda kwavo neMagwaro, kana kumwe kutaura kwavanopesana nako. Ipapo zvavasingadi zvinenge zvaiswa pachena iwe unobva wabviswa kana kudzingwa. Zita rako rinobva rasvibiswa. Sangano ravo rese harizodi kutaura newe zvachose, kunze kwekunge vachida kukumhura.
Vakuru vezvitendero panguva yeeksodo yechipiri vakaramba vachiti, “Muprofita Mosesi akati....” “Muprofita akati...”. “Muprofita akati...”. iyi yaive nzira ine simba yekuparadza hupikisi parudo rwavo rwekuva nesimba pamusoro pevanhu.
Vanyori nevaFarise ndivo vaive vakuru vechitendero panguva iyoyo.
Nhasi vafundisi ndivo vakuru mumakereke eMharidzo. Tarisai kuti nzira yavo yekuparidza inokoshesa mashoko akavakabata paitaura vanhu, mukutevedzera kutadza kwakafanana nekwakaitika makore 2 000 akadarika. Vatungamiri ivavo vaikoshesa zvakataurwa nemuprofita Mosesi vakaramba Jesu. Nhasi vakuru vezvitendero vanokoshesa zvakataurwa naWilliam Branham, vachiramba Magwaro anorwisa zvavanotenda.
Teererai vaparidzi vanhasi. “Muprofita akati...”. “Muprofita akati...”. Muprofita akati...”. Nhorondo inoramba ichidzokororeka.
Chigaro chaMosesi. “chigaro” chinotaura pamusoro pesimba.
ZVAKAZARURWA 13:2 .... shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo chovushe, namasimba makuru.
Muprofita, William Branham, ndiye ava chigaro chesimba ravo pamweya. Mashoko aakataura ndiwo ava kuvatungamirira.
Uyu ndiwo mweya mumwechete unobva kuRoma.
Kereke yeCatholic ina pope semukuru wayo.
Jesu akakunda Satani nekuti, “Zvakanyorwa zvichinzi...”. Chinhu chimwechete chisisanzwikwi nhasi uno chekuti “Zvakanyorwa zvichinzi...”. Ndicho chikonzero nei Satani asiri kukundwa uye akakwanisa kuburitsa Jesu mumakereke edu. Jesu, Shoko raMwari, akamira panze pemukova wekereke. “Kubata mashoko panotaura vanhu” ndiwo wava murairo mumakereke eMharidzo.
Chitadzo chikuru chaive chekushandura mharidzo dzake kubva pakuva “izwi remutumwa wechinomwe” kuita “Izwi raMwari”. Izvi zviri kubva zvaisa munhu pachinzvimbo chaMwari zvakazara. Hakuna chinhu chakaipa seichi.
Vicarius Filii Dei ndicho chiverengo chechiratidzo chechikara. (vaRoma vanotora zvese “v” na “u” sechinhu chimwechete.) mavara “u” na “v” ese aishandiswa sechinhu chimwechete pamavara maduku (mavara maduku paarufabheti) asi “V” chete ndiye aishandiswa sevara guru (vara guru rearufabheti) rakamiririra ese u na v.
Zvinyorwa zvepamidhuri zvaiitwa nemavara makuru. Zviri nyore kunyora pamidhuri vara V nemitsetse yakatwasuka kupinda U akatenderera.
Kuti tishandire mavara kuita manhamba tinofanira kunyora zita rechinzvimbo iri kuita mavara makuru: VICARIVS FILII DEI
Izvi zvinosangana muchiLatin umo V=5 I=1 C=50 D = 500. (I anodzokororwa katanhatu, V anodzokorora kaviri)
Saka ese anoburitsa 666.
ZVAKAZARURWA 13:18 Ndipo panokuchenjera. Unoziva, ngaaverenge chiverengo chechikara; nokuti chiverengo ndechomunhu; chiverengo chacho ndimazana matanhatu namakumi matanhatu nenhanhatu.
“Chiverengo chemunhu”. Munhu mumwechete. Munhu uyu aive ani anonzi nemaKristu anokwanisa kuda kutora nzvimbo yaKristu?
Pope Stephen II vakamboshandisa mavara aya mutsamba yakanyorerwa mambo akatora chigaro zvechisimba Pepin werudzi rwevatorwa remaFranks, mumakore akapoteredza 754 AD. Akazvipira kuzodza Pepin samambo akasarudzwa naMwari kana mambo wevatorwa Pepin akatenda kuchengetedza pfuma yekereke yeCatholic. Gwaro iri raive rechitsotsi raidaidzwa kuti Donation of Constantine. Pope akakumbirisa maFrank kuti auye kuzorwisa rumwe rudzi rwevatorwa rwainzi rwemaLombard vaive vatora guta reRavenna uye vaive vatanga kuisa nzvimbo yemaPope panjodzi.
Akataura kuti Petro ndiye aive mutariri wesuwo reDenga sezvo Jesu akapa Petro makiyi edenga. Saka kana mambo akabatsira Pope, aive mumiririri waPetro panyika, kana akazofa aizotenderwa kupinda denga naPetro achitenda kuita kwake.
Tarisisai kuchenjera kwacho. Jesu ndiye musuwo, asi simba chairo ndiPetro ane simba rekuvhura kana kuvhara musuwo.
Gwaro reDonation of Constantine rinoisa kukosha pamunhu mutsvene, Petro.
Jesu nekuzviwisira kuBhaibheri hazvisisiri zvinhu zvakakosha kwavari.
Satani anogarosimudzira munhu kuitira kuti abvise meso edu panaJesu. Saka kana tisina kusangana nehuvepo hwaJesu hwakadzama, hunoita kuti chero munhu ashaiwe simba kana achienzaniswa naJesu, ipapo tinonyengerwa kusvika pakuyemura nekusimudzira munhu mutsvene seimwe sarudzo yekusvika nayo kudenga.
Mutsetse mumwechete mutsamba iyi, inodaidzwa kuti Donation of Constantine, unoti ... (siyanai neChiratini, chingotarisisai kutaura kwakatarwa pasi) ...
ut sicut “B. Petrus in terris vicarius filii Dei es” videtur constitutus etiam et pontifices, Izvi zvinoturikirwa zvichinzi “Rumbidzai Petro ari panyika panzvimbo yeMwanakomana waMwari”.
Zvino Johane Muzaruriri anobva atarisa chiverengo chechinzvimbo ichi.
Kushandura mavara kuita manhamba tinofanira kunyora zita rechinzvimbo ichi mumavara makuru: VICARIVS FILII DEI
Chii chainyengera muNguva dzepakati idzi kana kuti Nguva yeRima?
MaKristu eRoman Catholic vaiti munhu mutsvene, Petro, aikwanisa kutora nzvimbo yaKristu. Vaiti kuti ukunde kupinda Denga, unofanira kuzviwisira kuna Petro nekuti aivhura musuwo weDenga, sezvo Jesu aive amupa makiyi eDenga. Kuratidza kuti unozviwisira kuna Petro unofanira kubvumirana zvakazara nechero nyaya yaunoudzwa naPope, nekuti anoti ndiye ega anokwanisa kukuudzai zvakataurwa naPetro.
Mugwaro iri Petro anonzi “ari panzvimbo yeMwanakomana waMwari”. Kusimudzirwa kwemunhu mutsvene kusvika pakuenzana naMwari.
Kukanganisa kukuru kuri pachinzvimbo ichi ndekwekuti vanotenda muchiCatholic vanochipa kumunhu ainamata Petro. Unokwanisa chete kupinda denga kana uchizviwisira kuna Petro ane simba rekuzarura masuwo eDenga. Munoratidza kuzviwisira kwenyu kunaPetro nekuzviwisira kuvamiririri vake va kuru maPope, vanova misoro yekereke yepanyika (kunyange vachipikisana). Munofanira kuzviwisira kunaPope, kuti muratidze kuti mazviwisira kuna Petro, mozokwanisa kupinda denga.
Tarisai kuti nzira imwechete iyi yakakunda zvakadii kupinda mumakereke eMharidzo.
William Branham ndiye nhume asisiri kuonekwa sezwi remutumwa wechinomwe, asi arikukudzwa kuitwa akaenzana “neZwi raMwari”. Hamungakundi kukwira kudenga kunze kwekunge mataura zvinotaurwa nenhume. Haakanganisi (chinzvimbo chaPope) nemumiririri wake mukuru panyika, mufundisi mukereke yeMharidzo, anokuudzai kuti akataura kuti kudii (kunyange vachipikisana pachavo). Saka nekuzviwisira kumufundisi wako, anozviti ndiye musoro wekereke panyika, unobva wafunga kuti uri kuzviwisira kuhama Branham, chinhu chinoshamisa pakuita uku kwese ndechekuti kune masangano mazhinji kwazvo anopikisana eMharidzo.
Nemufundisi wako “semusoro” wekereke, nekuturikira kwake kwemashoko akataurwa semukuru wako, kukosha hakusisiri pana Jesu neBhaibheri.
DANIERI 4:8 Asi pakupedzisira Danieri akauya pamberi pangu, iye ane zita rinonzi Bheteshazari, akatumidzwa zita ramwari wangu,
Nebukadinezzari, muhedeni, akadaidza muprofita wechiJuda zita ramwari wake akamunamata.
DANIERI 2:46 Ipapo mambo Nebukadinezzari akawira pasi nechiso chake, akanamata Danieri, akarayira kuti vamuvigire chipo nezvinonhuwira zvinozipa.
DANIEL 3:5 Kuti nenguva yamunonzwa kurira kwomumanzi nomutopota nembira norudimbwa nomutengeranwa namarimba, nezvimwe zvose zvinoridzwa, muwire pasi muchinamata chifananidzo chendarama chakamiswa namambo Nebhukadhinezari;
Mwari oga ndiye anonamatwa. Nebukadinezzari akaita mufananidzo waDanieri muprofita akamanikidza vanhu vose kunamata mufananidzo uyu.
Izvi zvinoratidza kuti Nebukadinezzari aifunga kuti muprofita ndiMwari. Kufanana nevaparidzi vakawanda veMharidzo vemazuva ano. (pamwe mungashaye kuti nei Danieri aive asipo pachiitiko chegomba remoto – aisakwanisa kupfugamira mufananidzo wake.)
62-0714 RUZHA RUSINA KUGADZIKIKA
Zvino, pano humwe husiku, ndakakutukai vakadzi nekuda kwekuita bvudzi pfupi. Munoziva here kuti Bhaibheri rinotaura nezvazvo mumazuva ekupedzisira? Zvakanaka. Munoziva here kuti muBhaibheri, kwaive kusateerera kwemunhukadzi kwakatanga nekodzero dzemunhukadzi, mukadzi kumashure uko, ndarini pakatanga chinhu chinonzi rufu? Uye rinhi pazvichapera nenzira imwe?
Rudzi rwevaHedeni rwakaziviswa namambo Nebukadinezzari nendimi dzisingazivikanwe nekuturikirwa, zvikapera nenzira imwe? Kutangwa nekunamata mufananidzo wemunhu, munhu mutsvene, Danieri (wainzi Bertishazzari) mufananidzo waDanieri, kuita kuti munhu wese anamate mufananidzo iwoyo wemunhu mutsvene, zvikabuda nenzira imwe?
Munoziva, Gwaro rega rega rine mhinduro kwariri, rinodzokororwa? Pachokwadi rinodaro.
Saka hushe hwekutanga hwevaHedeni kuBabironi mumufananidzo waDanieri wemuHedeni ndihwo hwakaunza pfungwa yekunamata muprofita Danieri.
Nguva yemaHedeni yekupedzisira, totenda kukurudziro yeBabironi yakavanzika, ichaguma nekunamata muprofita William Branham anosimudzirwa kuva “Izwi raMwari” kuratidzwa kweMwanakomana weMunhu, naMwari achiratidzwa panyama. Anotodaidzwa kuti “Ishe Branham Kristu”. Munhu asingatadzi.
Asi tiri kufanira kuva tichidzokera kune zvakatendwa pakereke yekutanga. Nguva yekereke yekutanga haina kubvira yatenda mune zvinhu izvi zvose.
Zvinhu zvakaipa zvemazuva ano izvi zvese zviri mupfungwa dzeavo vanokurudzira kuita uku.
Asi hatichafungi pachedu, sezvo riri basa rakaoma. Tinongotenda kune zvatinoudzwa tisingazvitsigiri neMagwaro. Iyi inhanho yekutanga takananga kuchiratidzo chechikara. Vanhu vanotitungamirira vachitonga zvatinotenda. Chiratidzo chiri pahuma dzedu, panoshanda paine njere kana pfungwa dzemunhu. Kufunga kwakagadzirwa. Zvakafanana nembwa dze Pavlov dzinoshanda nekudzidziswa- nguva imwe neimwe panorira pito dzinoziva kuti chikafu chasvika. Mumashure mechinguva mate anorwera kubva mumiromo yadzo panorira pito, kunyange pasina chikafu chauya.
Tsika dzevaNikoraiti ndiko kupamba ungano kupfurikidza kusimudzira munhu mutsvene pamusoro pavo vese.
1. Saka nekusvibisa zita remuprofita ari kuuya kuzotidzorera kuBhaibheri, murume wevuta akavanzika ari pabhiza jena anoritasva mukati meeksodo yechitatu akatakura nhema nehunyengeri. Kuita kunorasisa
2. Kusudurudza magedhe ekumwisa bhora. Apo muprofita anoedza kutidzosera kunotenda zvakatendwa nekereke yekutanga, mutasvi webhiza jena anofamba zvakachenjera oita kuti mufundisi atore zvinhu zvenguva inouya azviise munguva yakadarika. Semuenzaniso “Ishe akauya”, “Nguva yengoni yakadarika”, uye “Mutumwa mukuru wekunaZvakazarurwa Chitsauko 10 akauya panyika kuzozarura Bhuku”.
Hosha yemweya iyi inopararira apo vamwe vanhu vanotenda kuti kukwira kudenga kwakaitika, rumuko rwakaitika, uye tiri muMereniyamu.
Tarisisai. Kana zviitiko zvenguva inouya zvakatoitika saka hatina remangwana rekutarisira kwariri.
3. Chiratidzo chinouya chiitiko chaicho chisati chaitika ndicho chinoonekwa sechiitiko chacho chaicho.
Gore guru remuna 1963 raive chiratidzo cheMwanakomana weMunhu mudenga zvakuonekwa seKuuya kwaShe, zvinoonekwawo sekuonekwa kwaShe, uye zvinonziwo ndiko kuuya pasi kweMutumwa mukuru wekunaZvakazarurwa Chitsauko 10.
4. Zaruriro dzezviitiko zvenguva inouya zviri kudaidzwa kuti ndizvo zvitori zviitiko zvacho.
Zvino zaruriro dzakaziviswa nehama Branham dzekuziviswa kweZvisimbiso dziri kuonekwa sekuziviswa kwakazara kweZvisimbiso zvinomwe zvichaitika chete kana Mwenga waKristu amira akapoteredza chigaro chevushe Kudenga, mumashure mekukwira kweMwenga waKristu Kudenga. Vanoti Zvisimbiso zvinomwe zvakatozarurwa zvisinei nekuti akati Zvisimbiso zvinomwe hazvisati zvazarurwa uye maprofita maviri echiJuda vachazarura Chisimbiso chechitanhatu munguva yeKutambudzika kukuru. Zvisinei nekuti muChisimbiso chechina hatizivi kuti ndeupi Pope wenguva yekupedzisira mutasvi webhiza rakachenuruka anodaidzwa kuti rufu kuti ndeupi chaiye. Achaziviswa chete kana Mwenga akwira Kudenga.
Zvino tarirai. Ngazvisakukatyamadzai, asi tarirai kuti chii chinozarura Chisimbiso ichi: maprofita. Mazviona here? Amen. Ndizvozvo chaizvo. Oh, tave kurarama muzuva regondo, hama, takatarira kumakore. Vanobva vazarura Chisimbiso chechitanhatu. Vane simba rekuita izvozvo. Amen. Chisimbiso chenyu chechitanhatu chinobva chauya chakazarurwa. Mazviona here?
Kukanganisa kwakatangira kubva pekutanga.
Bhuku rezvisimbiso zvinomwe rinotaura paduku richiti vatumwa vakaita Gore, mumashure mekupedza kutaura nehama Branham paaive musango achivhima. Izvi zvese kutadza kwakazara nekuti Gore guru rakaonekwa musi wa 28 Kurume 1963. Zvichibva kumwanasikana wake Beky hama Branham vakasangana nevatumwa musi wa 8 kurume 1963 pedyo nemakomo eSunset Peak neRattlesnake mesa. Gore guru, rakaonekwa mazuva masere vasati vasangana nevatumwa, rakatorwa mifananidzo mamaira 200 kumusoro sezvo rakafamba pamusoro peFlagstaff. Pazuva iroro hama Branham vaive vachiri kuTucson vachironga kuita rwendo rwemamaira 1 000 kumabvazuva kuHouston.
Hama Branham, munhu wenyama anotadza, vakakanganisa pavakataura pamusoro pezuva nenzvimbo yerwendo rwavo rwekunovhima. Vakanga vasiri pasi peGore guru. Vatumwa vakauya kwavari mangwanani. Gore rakaonekwa pakudoka kwezuva, mamaira 200 kumusoro, uye mazuva masere vatumwa vasati vazviratidza kuhama Branham. Saka vanotenda kumasangano eMharidzo vanoda kuti atukwe vari kumanikidzwa kuti vatende kuti zvaakataura zvese haana chaakatadza - “Izwi raMwari” harikanganisi! Saka izvozvi tine humbowo kuratidza kuti kuita uku kwaive kukanganisa, uye vanhu veMharidzo (Massage) vari kuedza vachikundikana kurwira kukanganisa uku varikuratidza kusarongeka kwavo. Kurasika uku kuri kushandira munhu mumwechete, murume webhiza jena murume wevuta.
Kuedza kuratidza kuti kutaura kusiriiko ndiko ndezvenyika ino kwete chiKristu. Mweya waMwari unoburitsa pachena kukanganisa.
Tarisai zita riri pakavha rebhuku reZvisimbiso Zvinomwe (Seven Seals book).
Haritauri kuti ndiko kuzarurwa kweZvisimbiso zvinomwe. Rinoti kuZiviswa (kwekuzarurwa kana kuratidzwa) kweZvisimbiso zvinomwe”.
Maprofita akatoenda kuseri kwezvidzitiro zvenguva akaona ramangwana muzviratidzo. Asi zvaive zvakangofanana nekuti aive mukati mezviitiko izvi. Apa tavakuziva kuti chii chichaitika. Asi Zvakazarurwa Chitsauko 5 ne 6 zvakazoitaka mumashure mekukwira Kudenga kweMwenga, zvakaitika kuChitsauko 4, mumashure menguva dzemakereke manomwe.
Tinonyengerwa zviri nyore kana tichifunga kuti kuziviswa kwechiitiko chitori icho chiitiko chacho. Mwari anogarozivisa zviitiko zvisati zvaitika. Anobva azozvizadzisa.
5. Vafundisi vemakereke eMharidzo vanoti vanoziva zvakavanzika zvisina kunyorwa muBhaibheri.
Izvi zvese ifungidziro, sezvo vasina micherechedzo yekuturikira.
Vanoziva kuti Ishe akauya rini, zita Rake idzva, vanoziva zvakarehwa nekutinhira kunomwe, vanoziva kutorwa kwechitatu. Vanoziva Chisimbiso chechinomwe. Ndangariro dzavo hadzina miganhu, uye havana Magwaro akanyorwa anotsigira kutaura kwavo.
Kana vachiparidza pamusoro pezvinhu izvi vanenge vachitaura pamusoro pezvinhu zvisina kunyorwa muBhaibheri. Makereke emagungano anoitawo zvimwechete izvi. Vanoparidzawo pamusoro pezvinhu zvisina kunyorwa muBhaibheri.
6. Kuvamba chimiro chekereke pamusoro penheyo dzisina kunyorwa mumagwaro ndiko kufamba kwemutasvi webhiza jena rehunyengeri.
Nekuvamba chimiro chekereke isina nheyo dzeMagwaro, inotongwa nehukuru hwevafundisi, nemhuri yemufundisi, vanhu vari vekuti hongu, uye vachingotevera. Magungano eMharidzo haakwanisi kudzokera kumuenzaniso wakasiiwa nekereke yekutanga nekuti kereke inotevera nheyo dzinomisikidzwa nevafundisi inoparadza nzira inodiwa neBhaibheri. Vanhu, vakasiya kuzvifungira kare kare, havachagoni kurarama pasina mufundisi anovafungira nekuti iye ega pachake ndiye anoziva kuti oturikira sei mashoko akataurwa nevanhu vakaita mbiri. Vanhu vakasukurudzwa njere kuti vafunge kuti mashoko akabatwa paitaura vanhu akagadziriswa, asingakwanisi kutsigirwa neBhaibheri, ndiwo chokwadi.
Nei mhuri yemufundisi ichibatawo pakutungamirira kereke? Zvakavakoshera kuitira kuchengeta mari zhinji mumba mavo, kunyange zvazvo Erisha akatsiva Eria aive asina kana hukama naye. Muprofita Samueri aive nevanakomana vaive vakarasika kwazvo.
“Mufudzi” (pasita) watinoti mufundisi akataurwa nezvake kamwechete muTestamente Itsva. Saka basa iri harina simba kubva muMagwaro kuti anoriita atonge semusoro wekereke.
Asi regai titarise mumwe wevakuru vemakereke ekutanga aiita hunhu hwakangofanana nehurikuitwa nevafundisi nhasi uno.
III JOHANE 1:9 Ndakanyorera kereke; asi Diotrefe unoda kuva mukuru pakati pavo, unotiramba isu. (Diotrefe aive asingadi mapostora akanyora Magwaro.)
Tarirai rudo rwekutonga urwu. Kuda kuva munhu anotonga. Akagara pachigaro chehukuru chemuprofita Mosesi, kana kuti muprofita wezuva redu ranhasi William Branham. Kuva musangano rake, unofanira kubvumirana naye Diotrefe. Nhamo inova pamusoro pako kana ukaedza kupikisana namufundisi Diotrefe!
III JOHANE 1:10 kana ndichivuya, ndichayevudza mabasa ake aanoita, kuti kuti anotiitira makuhwa namashoko akaipa; vuye, haatende naizvozvo bedzi, iye amene haagamuchiri hama, vuye vakanga vachida havo unovarambidza nokuvadzinga mukereke. (Hazvisi zvinhu zvitsva. Kudzingira vanopikisa zvaanoda iye achirambidza vanhu vemukereke make kutaura navo).
Nerumwe rutivi tichiwedzera, mufundisi anokwanisawo kuita basa rakanaka semubatsiri ane ruzivo pamusoro pekuti vanhu vanoita hunhu hwakadii uye vanofunga sei, nekuti vafundisi vanobatsira vanhu mumatambudziko avo ehupenyu, mabasa, uye mumhuri dzavo, saka anomira senhungo inobatanidza zvinhu zvese pamwechete nekukurudzira uye kushingisa vanhu kuti vasakande mapfumo pasi. Vanhu vanoda nzeve inoda kuteerera zvine hunyoro kuti vadurure matambudziko avo uye kutya kwese kuri mavari.
63-0724 MWARI HAADANI VANHU KUZOTONGWA ASINA KUTANGA AVAYAMBIRA
Asi munoona, mukereke muna mufundisi, mufundisi iyeye munhu akasarudzika. Akavakwa nenzira yekugona kutakura kuipa kwevanhu vose. Ndiye mutakuri wematambudziko, ndiye nzombe yeungano. Ndiye munhu anokwanisa kugara pasi kana paine munhu ane mhosva neumwe, ogara navo vose pasi mhuri mbiri (asina rutivi rwaakarerekera) ovagadzirisa odzosa zvinhu zvose pakunaka. Mazviona? Ndiye mufundisi, anoziva kuti oita sei nezvinhu zvinenge zvanetsa.
Tarirai kuti mufundisi (pasita) inhengo yeungano. Izvi zvakakosha. Haasi musoro wekereke. Boka revakuru ndiyo yaive nzira yekutanga yekutungamirira kereke, pasina mutungamiri mumwechete pamusoro pavose.
JEREMIA 3:15 "Ndichakupai vafudzi vanofadza moyo wangu, vachakufudzai nezivo nenjere.
Hakuna Magwaro akati mufudzi anofanira kuva mufundisi.
Mufudzi munhu, saka ari pamusoro pemakwai nekure. Kutaura kuti kereke ine mufudzi mumwechete kunokwidziridza mufundisi kuti ave pamusoro pemakwai, zvomupa kukosha kwepamusoro zvomugonesa kuti ave mudzvanyiriri. Hakuna mufudzi anobvunza zvekuita kumakwai ake. Anongoatungamira kana kuaendesa kwaanoda iye kuti aende. Haisi nzvimbo yakanaka kuti tiwanikwe tiri. Hakuna munhu mumwechete anokwanisa kuva mufudzi wemakwai. Iri ibasa rakaitirwa Jesu.
MAPISAREMA 23:1 Jehovha ndiye mufudzi wangu;
Hakuna Magwaro akati Mufundisi ndiye mudzidzisi weBhaibheri, apa ndipo panobva parasikira chimiro chekereke chese. Vakasimudzirwa nekuzvikudza, vafundisi vanoparidza mifungo yavo yakajeka isina nheyo dzeBhaibheri. Havana hunyanzvi hwekuunza Magwaro pamwechete kuti vatsanangure dzidziso yavo.
63-0724 MWARI HAADAIDZI MUNHU KUZOTONGWA ASINA KUTANGA AMUYAMBIRA
Mudzidzisi munhu akakosha. Anogara pasi pekuzodza kweMweya uye anogona kutora Shoko oribatanidza kupfurikidza Mweya Mutsvene, naizvozvo, mufundisi kana muvhangeri haakwikwidzi naye.
Vafundisi havatambiri vadzidzisi veBhaibheri vanoda kuvagadzirisa.
Diotrefe aidzinga vaya vaipikisana naye. Hudzvanyiriri hwemunhu mumwechete. Kuisa munhu mumwechete pakutonga, chaanoita kumanikidzira kuda kwake oburitsa mbeu yezvaanoda iye obvisa hupikisi. Ungano inobva yatora mweya wemufundisi wayo, usina kunaka.
Motto yemufundisi ndeyekuti, “munhu wese ari pasi pekuda kwangu”.
1965 BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE MBEU YECHINIKORAITI
Makereke haana kubvira adzidza chinhu ichi kubva muMagwaro kana munhorondo. Nguva dzose Mwari anopa kushanya kweMweya Mutsvene vanhu vosunungurwa, pasina nguva vanozvisungirira zvakare pachinhu chavakasunungurwa kubva kwachiri. Luther paakabuda muchiCatholic, vanhu vakava vakasununguka kwekanguvana. Asi paakafa, vanhu vakabva varonga zvavaifungidzira kuti aitenda mazviri vakazviitira zvitendero zvavo nemazano avo vachimhura wese aipikisana navo. Vakabva vadzokera muchiCatholic nenzira yakati siyanei zvishoma.
Masangano eMharidzo akaita chinhu chimwechete ichi. Vemasangnao vane makereke anotongwa nevafundisi, vemakereke eMharidzo vakabva vatorawo nzira iyi. Vafundisi veMharidzo vakagadzirisa mashoko avakabata paitaurwa vakamaita kuti amire sezvavanofungira kuti zvaitendwa mazviri nehama Branham. Mukuita uku vakaita chitendero chavo vega uye mazano avo vega.
Jeremia akatiyambira pamusoro pevafundisi nekuita kwavo pamusoro pekereke. Akataura chinhu chimwechete chakanaka pamusoro pavo, kuti Mwari achaita vafudzi (mapasita) (haana kuti vadzvanyiriri), akabva azoenderera mberi kumhura vafudzi (mapasita) kanomwe. Izvi zvinotyisa.
Hushumiri hwakarumbidzwa kamwechete hukatukwa kanomwe hahungave pakutonga.
JEREMIA 2:8 Vapirisiti havana kuti, `Jehovha uripiko?' Vaifambisa mirairo vakanga vasingandizivi, vafudzi vaindidarikira, vaporofita vaiporofitira Bhaari, vachitevera zvinhu zvisingabatsiri.
JEREMIA 10:21 Nokuti vafudzi vava vasina njere, havana kubvunza Jehovha; naizvozvo havana kuzofara, namapoka avo ose akapararira.
JEREMIA 12:10 Vafudzi vazhinji vakaparadza munda wangu wemazambiringa, vakatsika mugove wangu namakumbo avo, vakaita mugove wangu unodikanwa rive renje risina chinhu.
Waini inomiririra kusimudzirwa kwezaruriro. Kuzadzwa nerudo rwekutevera zvakataurwa, vateveri vemasangano eMharidzo vanoziva zvishoma kwazvo pamusoro peBhaibheri.
JEREMIA 17:16 Kana ndirini, handina kukurumidza kusakuteverai somufudzi,
Vafundisi sevatungamiri vedzimwe nyika, vari mushishi kuzadzisa zvido zvavo pachavo. Havatsvagi kuda kwaMwari. Vanotevera zvinangwa zvavo. Vanotsvaga kuzvipfumisa pachavo.
JEREMIA 22:22 Mhepo ichaparadza vafudzi vako vose,
Mhepo inomiririra matambudziko, uye inounza mhepo inopisa. Vanotaura zvizhinji, asi vachitaura zvishoma zvakakosha zvingatidzorera kudzidziso yeTestamente Itsva. Vanotaura dzidziso zhinji zvisiri izvo. Ndicho chikonzero kune masangano mazhinji emharidzo.
JEREMIA 23:1 Vane nhamo vafudzi vanoparadza nokuparadzira makwai amafuro angu! Ndizvo zvinotaura Jehovha
SaDiotrefe, vafundisi havakwanisi kugara nehupikisi pakati pavo. “Itai zvinhu nenzira yangu kana kuti ibvai kwandiri.” vafundisi vanoparadza kubata kwechero munhu anoda kuvapikisa. Kuva nhengo yekekere yake zvinoreva kuti unofanira kubvumirana naye.
JEREMIA 23:2 Naizvozvo zvanzi naJehovha, Mwari waIsiraeri, pamusoro pavafudzi vanofudza vanhu vangu, "Makaparadzira makwai angu, mukaadzinga, mukasaatarira; tarirai, ndichakurovai nokuda kwezvakaipa zvamabasa enyu ndizvo zvinotaura Jehovha.
3 Ndichaunganidza vakasara vamakwai angu kunyika dzose kwandakanga ndaadzingira, ndichaadzosera kumafuro awo; achaberekana nokuwanda.
4 Ndichaagadzira vafudzi vanoafudza; haangazotyi kana kuvhunduswa, hakuna nerimwe ringashaikwa ndizvo zvinotaura Jehovha."
Vafundisi varikuparadzira makwai idambudziko riri pasi rese. Vose vakabatwa nemweya wekudzvanyirira uyu.
Mwari anoda kupa vafudzi, muhuzhinji. Hutungamiri hwemunhu mumwechete harizi zano raMwari rekutanga mukereke yekutanga. Ipapo, kereke yepanzvimbo yega-yega yaive pasi pechikwata chevakuru.
Chikwata chevakuru chinobvisa kuda kwehutongi hwemunhu mumwechete.
Kufudza makwai ibasa remufudzi. Saka chikwata chevakuru chinoita basa remufudzi.
Iyi ndiyo sarudzo huru. Ndiyani anotungamirira kereke? Mufundisi anotonga here, kana kuti chikwata chevakuru panzvimbo.
Muenzaniso wekereke yekutanga waive chikwata chevakuru. Saka iyi ndiyo nzira yaifamba ne mvura yekutanga (mvura yedzidziso).
Pauro aive mutumwa kukereke panguva yekereke yeEfeso. Saka tinofanira kutarisisa nzira yakaitwa naPauro. Toitawo saizvozvo kana tadzoserwa pakutenda kwekereke yekutanga.
Petro, pedyo nemagumo eTestamente Itsva, aibvumirana naPauro zvakazara.
Petro haana kubvira azvipa chinzvimbo akazvidaidza kuti mupostora. Akagutsikana nekudaidzwa kuti mukuru. Ipapo anenge akaenzana nevamwe vakuru, kwete kuva pamusoro pavo. Hukama pakati pevakuru mukereke. Kwete chiprista chechiAroni chehushumiri hushanu pamusoro pevanhu, nemufundisi akasimudzirwa pamusoro pehumwe hushumiri hwese mukereke.
4 Kana Mufudzi mukuru achizovonekwa, muchawana korona yokubwinya isingasvavi.
Zvinoda chikwata chevakuru kuti vazadzise basa remufudzi anotungamirira nekufudza boka. Kana mukuru mumwechete akatadza mumwe wake anomugadzirisa. Basa rekubatirana sechikwata ndiro rinodiwa kuti rizivise zvakavanzika zveBhaiberi, rogadzirira boka kuti rive rakagadzirirwa mufudzi waro wechokwadi, Ishe Jesu Kristu. Vakuru sechikwata basa ravo nderekutungamirira kereke kuti idzokere pakutenda kwekereke yekutanga. Hakuna kereke muTestamente Itsva yaive nemunhu mumwechete semukuru wayo. Saka kereke yaive isina munhu aive musoro wayo. Ipapo chete ndipo panokwaisa kupinda Kristu kuva musoro wekereke. Hakuna munhu anokwanisa kuita misoro miviri, saka kana mufundisi ari musoro Jesu anobva amira panze.
Kereke yeMharidzo yese ine mufundisi semusoro wayo, Jesu akamira panze pemukova wayo. Bhaibheri rinotaura pamusoro pekuti haasarudzi- akamira kunze kwekereke yega-yega munguva yekereke yeRaodikia.
Ndiye Chiedza. Kana akamira kunze mukati mekereke munenge muri murima. Saka hamuna anokwanisa kuona, saka tiri mapofu, asi tisingazivi nekuti tajaira kuvaka kutenda kwedu kubva pamashoko akataurwa nekuisa zviitiko zvenguva ichauya munguva yakadarika zvekuti takarasikirwa nekuona kuti takabviswa tikaenda kure sei nekureva kweMagwaro. Kana chiedza chikabuda zvishoma nezvishoma mumba tinoramba tichijairawo kuwedzera kwerima kunenge kuchipinda tisingatooni kuti mava murima zvakadii. Kana mumwe munhu akauya achibva panze iyeye ndiye anozoona kuti mumba imomo murima. Ndicho chikonzero nei vafundisi vasingadi kuti vanhu vemasangano avo vataure nevanhu vari kunze kwesangano ravo, nekuti vanhu vekunze ava vanokwanisa kuona kuti dzidziso dzavo irima rakadii nekuda kwekushaiwa kwayo Magwaro.
Rangarirai kuti mutasvi webhiza jena asina museve weMagwaro akaita kuti Pope asarudzwe semudzvanyiriri, uye munhu mumwe musoro weRoman Catholic. Saka mutasvi mumwechete uyu anoda mufundisi kuti ave pamusoro pekereke yega-yega. Iyi inzira yake yakabudiririra kwemakore 2 000. Iyi inzira yakakosha kwazvo yekuuraya chokwadi mukereke.
MABASA 20:29 Ini ndinoziva kuti kana ndaenda mapere anoparadza achapinda pakati penyu, asingaregi boka.
Nyoka ine huturu inonzi chiva nebhiza jena rehunyengeri zvinobva zvapinda.
Vatungamiriri vanoda kuti vanhu mukereke vavatevere ivo nemazano avo. Rudo rwavo rwehukuru urwo runoti, “Nditeverei nekuturikira kwangu kwandinoita zvakataurwa”.
MATEO 23:7 Nokukwaziswa padare, nokuidzwa Rabhi navanhu.
Tarirai kudaidzwa kwavo. Zita rechinzvimbo rakasimudzirwa kwazvo rinosimbisa kuzvikoshesa kwavo. Vane shungu kwazvo nako kukudzwa uku.
8 Asi imi musaidzwa Rabhi, nokuti mudzidzisi wenyu ndomumwe imi mose muri hama.
Kereke isangano rine hama munashe. Hatidi mazita nezvinzvimbo. Musaidza munhu Rabhi Revi. Mudaidzei kuti hama Revi. Nhasi uno vafundisi vanokoshesa kubatanidza zita rechinzvimbo rekuti mufundisi nemazita avo. Uku kusimudzira munhu pamusoro pevamwe, chinova chinhu chakaipa. Kana zita rake ari Ray, vanoti tinofanira kumuidza mufundisi Ray. Izvi zvakaipa anofanira kudaidzwa kuti hama Ray.
“Musaidzwa nemunhu Rabhi”. “Musaidzwa Mufundisi”.
Hakuna munhu muBhaibheri akambodaidzwa kuti Mufundisi nhingi. Nhasi haungakandi dombo ukasatema Mufundisi Nhingi, kana Mumwe.
BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE CHAPUTA 9 NGUVA YERAODIKIA
Izvozvi munyaya dzese muchaona kuti vaprofita venhema ndivo vari kunze kweShoko. Sekukuonesai kwataita kuti ‘antikristu’ zvinoreva kuti ‘anti-Shoko’ saka vaprofita ava vanouya vachishandura Shoko, vachiripa zvirevo zvinoenderana nekuda kwavo kana kuturikira kwavo. Makamboona here kuti vanhu vanorasisa vanhu vanovasungirira pedyo navo zvakanyanya nekuda kwekutya? Vanoti kana vanhu vakasaita zvavanoda, kana kuti kana vakabva kwavari, ipapo kuparara kwavo kunobva kwatevera.
Ndivo vaprofita venhema, nekuti muprofita wechokwadi anotungamirira vanhu kuShoko vosungirira vanhu pana Jesu Kristu uye haaudze vanhu kuti vamutye kana kutya zvaanotaura, asi kuti vatye zvinotaurwa neShoko.
Tarirai kuti vanhu ava saJudasi vari kutsvaga mari zvakadii.
Vanokuita kuti utengese zvese zvaunazvo vokuita kuti uvape mari yacho ivo nemabasa avo ehunyengeri. Vanopedzera nguva yavo huru pakupanana zvipo kukunda pakuparidza Shoko. Avo vanoedza kushandisa zvipo vanoshandisa zvipo zvine kutadza mukati vati vanoda mari nekuda kwezvipo zvavo, vosiya Shoko vozvidaidza kuti ndezvaMwari. Vanhu vanobva vaenda kwavari, vobata navo, vovatsigira, votenda zvavanotaura, vasingazivi kuti inzira yekuenda kurufu.
Kutevera Bhaibheri, kana kutya mukuru wekereke. Ndidzo sarudzo dzatinadzo.
53-0614A KUBATIRA NEKUGUTSIKANA MUKUTENDA KWAKAMBOPIWA KUVATSVENE
Tarirai, hurongwa hukuru muBhaibheri kukereke, mukereke panzvimbo ndivo vakuru.
57-0126B NHAU PARWENDO RWEKUINDIA
…. Zvino, rangarirai chikonzero ndakabatirira pakereke yeBaptist kwaive kusununguka kwekereke panzvimbo chandinofunga kuti ndicho chipostora. Mazviona? Kwete seveBaptist, tinavo muno. Handitoende kuruwadzano rweko, asi mukereke yeBaptist, harisi sangano, harifaniri kuva rakadaro. Rave parizvino, asi raisafanira kuva sangano. Iungano yehama munashe. Uye rusununguko rwekereke yepanzvimbo. Uye kana Mwari achida kusvitsa Mharidzo kumunhu wake, mukuru wake, anova ....
Zvichibva muBhaibheri, chinzvimbo chepamusoro-soro mukereke panzvimbo mukuru kana mutariri.
57-0908M VAHEBERU CHITSAUKO CHECHISHANU NECHECHITANHATU. 1
Ndiratidzei neBhaibheri kuti chii chikuru, muBhaibheri, kukunda mukuru mukereke panzvimbo? Ndizvo chaizvo, hongu, baba, zvakanakisa. Makereke ese anoita seari pahukama saizvozvo, pamwechete. Asi rusununguko rwekereke panzvimbo!
1965 NGUVA YEKEREKE YEPEGAMO- BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE CPT.5 DZIDZISO YECHINIKORAITI
Mucharangarira herekuti ndakamboburitsa munguva yeEfeso kuti izwi rekuti, tsika dzevaNikoraiti, rinobva pamazwi maviri echiGiriki: Nikao rinoreva kuti kupamba, nerekuti Laos rinoreva kuti ungano. Tsika dzavaNikoraiti zvinoreva kuti “kupamba ungano”. Nei ichi chiri chinhu chakaipa kwazvo? Chinhu chakaipa nekuti Mwari haana kubvira aisa kereke yake mumaoko evatungamiri vakasarudzwa vanofamba nekufunga kwezvematongerwo enyika. Akaisa kereke yake mumaoko evanhu vakasarudzwa naMwari, vakazadzwa neMweya, vanorarama neShoko vanotungamirira vanhu nekuvafudza muShoko rake. Haana kuparadzanisa vanhu kuvaisa muzvikwata kuitira kuti vazhinji vatungamirirwe nechiprista chitsvene. Ichokwadi kuti hutungamiri hunofanira kuva hutsvene, asizve nesangano rese rinofanira kuva dzvene. Zvakare, hapana muShoko pakanzi vaprista kana vashumiri kana vamwe vakadaro vanofanira kuva pakati paMwari nevanhu, kana nzvimbo pavakapatsanurwa pakunamata kwavo. Mwari anoda vanhu vose kuti vamude vamubatire vari pamwechete.
Tsika dzevaNikoraiti dzinoparadza kuita ikoko dzoparadzanisa vashumiri kubva kuvanhu dzokwidziridza vatungamiri pachinzvimbo chevaranda.
Izvozvi dzidziso iyi yakatanga sekungoitwawo munguva yekereke yekutanga. Zvinoita sekuti dambudziko rinogara mumashoko maviri: ‘vakuru’ (presbyters) uye ‘vatariri’ (mabhishopu).
Zvisinei nekuti Magwaro anoratidza kuti mune vakuru vakati wandei mukereke, vamwe vakatanga (Ignatius pakati pavo) kudzidzisa kuti pfungwa yekuti pave nabhishopu yaive yekutonga kana kuva nesimba pamusoro pevakuru mukereke.
Izvozvo chokwadzi chenyaya iyi izwi rekuti ‘mukuru’ rinoratidza kuti munhu wacho ndiyani, apo izwi rekuti ‘bishopu’ rinoratidza basa remunhu mumwechete iyeye. Mukuru ndiye munhu. Bhishopu ndiro basa remunhu wacho. ‘Mukuru’ rinoreva uye richaramba richireva zera remunhu munaShe. Mukuru kwete nekuti akasarudzwa kana kuti akagadzwa, nezvimwe zvakadaro., asi nekuti AKWEGURA. Ane makore ati wandei, akadzidza, kwete pwere, anovimbika nekuda kwezvaadzidza nekuona mukurarama uye nekuda kwenguva yake refu ari muKristu.
Asi kwete, mabhishopu haana kuramba ari pachipostora chaPauro, asi vakaenda pakubata kwaPauro paakadaidza vakuru kubva kuEfeso kuenda kuMireto kuna Mabasa Avapostora 20. pavhesi 17 gwaro rinoti “vakuru” vakadanwa pavhesi 28 vakadaidzwa kuti vatariri (mabhishopu). Mabhishopu aya, (pasina kuramba vakazadzwa nepfungwa dzezvematongerwo enyika uye vane rudo rwekuva nesimba) vakati Pauro akati zvinoreva ‘vatariri’ vaive nesimba kukunda vakuru vaive nesimba pakereke iri panzvimbo pavo chete. Kwavari bhishopu aive ava nesimba rakawedzerwa pamusoro pevakuru vekereke panzvimbo. Chinhu ichi chaive chisiri muMagwaro kana munhorondo, asi chero munhu aive nechiremerera saPolicarp akatevera kuita uku.
Saka, chakatanga sechinhu chiduku munguva yekereke yekutanga chakabva chaitwa dzidziso ndizvo zvachichiri nhasi uno. Mabhishopu achiri nesimba rekutonga vanhu nekuita zvaanoda navo, vachivaisa pavanoda muhushumiri. Izvi zvinorambidza hutungamiri hweMweya Mutsvene Anoti “Ndibvisirei Pauro naBarnabasi kubasa randakavadanira” izvi tinozviti anti-Shoko uye anti-Kristu.
II VATESARONIKA 2:2 Kuti murege kukurumidza kuzununguswa pakufunga kwenyu,kana kuvhunduswa kana nemweya kana neshoko, kana nemwadhi, inonzi inobva kwatiri, muchiti zuva raKristu ratosvika;
Kuuya kwaShe kwakagara chiri chinhu chinorasisa vazhinji, chinhu chikuru pakunyengerwa kwevanhu.
3 Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai nomutovo upi noupi; nokuti zuva iro harisviki, kana kusati kwatanga kuvuya, nomunhu wezvivi, mwanakomana wokurashika, asati ambovonekwa,
Panguva yeKuuya kwaShe kunyengera kunobata zvine simba vatendi vorasika kubva paMagwaro.
4 Iye, unorwa achizvikudza pamusoro pezvose zvinonzi Mwari, kana zvinonamatwa; nokudaro kuti unogara saMwari mutembere yaMwari, achizviita Mwari.
Munhu anobva asimudzirwa kutora chinzvimbo chaMwari.
63-0630E HUPENYU HWAKO HWAKAKWANIRA EVANGERI HERE
Uyo agere mutembere yaMwari, achizvisimudzira, zvese zviri pamusoro paMwari; iye saMwari,” anoregerera zvivi panyika, nezvimwe. Zvinhu izvi zvinoitika sei! Asi hazvingaitiki kusvika pakuguma, kusvikira kereke yatanga kubva pamutambo wemweya, ichizvidzora nekuzvironga patsva. Zaruriro yorega kugara nekereke.
VeRoman Catholic vanotenda kuti tembere yaMwari iVatican. Vanhu pavanorasika kubva kuMagwaro, saka Pope akasimudzirwa akapa vanhu mukana wekuti vagone kutenga kuregererwa zvivi zvavo naye. Asi Mwari ega ndiye anoregerera zvivi. Saka akazviratidza kuti anozviti akaenzana naMwari.
Vicarius filii Dei. Vanhu muNguva yeRima iyi vaive vasingagoni kunyora nekuverenga, sezvo mamonk nemaprista ega ndivo vaigona kuverenga. Petro aive asimudzirwa kuti atore nzvimbo yaKristu. Vicarius Filii Dei.
Nhanho yaantikristu yekutanga kunyengera muzvitendero zvichiteverwa nekurasika kwevanhu kubva pachokwadi. Ipapo munhu mutsvene, Pope, akasimudzirwa kusvikira vanhu vatenda kuti anokwaisa kuregerera zvivi. Izvi zvakapa Pope chinzvimbo chakafanana nechaMwari.
Nzira imwechete iyi yakatevera panguva yemvura yekutanga, mumashure mekushanyirwa kwehama Branham nevatumwa musi wa 8 kurume 1963. hama Branham pavakazivisa zvakavanzika, vaparidzi veMharidzo vakatanga kuturikira zvavaive vataura vachivaka chimiro chitsva chezvitendero zvakasiyana nekure. Dzidziso dzeMharidzo idzi dzakabvisa vanhu zvakanyanya kubva kuMagwaro. Kubva kwavaiita kune zvakanyorwa muBhaibheri, ndiko kukurawo kwekusimudzira kwavaiita hama Branham, kusvika vatanga kufunga kuti aive Izwi raMwari uye kuonekwa kweMwanakomana wemunhu. Vakabva vamuti ndiye Mwari airatidzwa mumunhu.
Zvaakataura zvakaitwa zvakaenzana neMagwaro uye dzimwe nguva zvaitoiswa pamusoro peMagwaro. Kana mazwi avakataura akarwisa Magwaro ipapo vanhu vaibva vadzidziswa kutenda kune zvaakataura.
Saka Satani akanyengera vatendi veMharidzo nenzira imwechete yaakanyengedza nayo kereke yeCatholic.
Vanotenda kuMharidzo vanofunga kuti zvakataurwa nehama Branham ndizvo mukuru wavo. Uyu mweya wechiCatholic.
Patinongobva paBhaibheri Shoko rakanyorwa, Satani anotisunga mumisungo.
Kubva kwakaita “veMharidzo” pakuedza kwaWilliam Branham kutidzorera pakutenda kweTestamente Itsva, ndiko kukurawo kwekurumbidza kwavo William Branham nekusimudzira zvaakataura kuti zvienzane kana kukurira Magwaro.
This must be some kind of subconscious compensation mechanism. Izvi zvinofanira kuva rudzi rwekupa mbiri nekusaziva.
JEREMIA 5:24 Havati mumoyo yavo, `Zvino ngatitye Jehovha Mwari wedu, unotipa panguva yazvo mvura yokutanga neyokupedzisira, iye unotichengetera mavhiki akatarwa okukohwa.'
Kwaive nemwaka mina yemvura yekudyara kana kuti yedzidziso. Kuyananisirwa kwaLuther. Hutsvene nekuparidzira panguva yaWesley. Rubapatidzo rweMweya Mutsvene panguva yePentecosti. Zvino tinobva tada muprofita wenguva yekugumisira kuti azivise zvakavanzika zveMagwaro.
MATEO 17:11 Akapindura (Jesu), akati, Eria uchavuya hake, avandudze zvinhu zvose
Humbowo hwerubapatidzo rweMweya Mutsvene ndiko kugona kunzwisisa Shoko remuBhaibheri rinoziviswa pazuva renyu.
Ipapo ndipo pega patinodzoserwa pakutenda kwekereke yevapostora yekutanga.
Ndipo panobva pauya mvura yekupedzisira.
Mvura yekupedzisira zvinoreva mvura yekukohwa kana kuti mvura yekuunganidza mbeu. Ruth akaunganidza mbeu dzaive dzasaririra pakukohwa.
Nguva yekukohwa inouya apo mbeu dzinobviswa uchiita seunodzura kubva padavi radzakabereka zvichimiririra vatendi vanotorwa kunosangana naShe mumakore.
17 Zvino isu vapenyu, vakasara, tichatorwa pamwe chete navo mumakore, kuti tichingamidze Ishe mudenga; naizvozvo tichava naShe nguva dzose.
HOSEA 6:3 Ngatimuzive, ngatishingaire kuziva Jehovha; kubuda kwake kwakatemwa sokwamangwanani; achauya kwatiri semvura, semvura yokuteverera inodiridza nyika."
Kuenda kwaShe kwakatemwa mangwanani munguva yekereke yekutanga. Haadi kereke ichaita zvakasiyana nezvakaitwa nekereke yake yekutanga. Izvi zvimwechete mukukohwa kwatinoziva. Mbeu yekupedzisira yakafanana nembeu yakatanga kudyarwa.
I VAKORINTE 15:52 Pakarepo, nokubwaira kweziso, nehwamanda yokupedzisira; nokuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa mukusavora; nesu tichashandurwa;
JOERI 2:23 Naizvozvo farai, imi vana veZiyoni, mufarisise muna Jehovha Mwari wenyu; nokuti anokupai mudzidzisi wokururama, uye anokunisirai mvura, mvura yokutanga nemvura yokuteverera, nomwedzi wokutanga
48-0304 MUTUMWA WAMWARI
Akavimbisa mvura yekutanga nemvura inotevera mumvura yekupedzisira, mune mamwe mashoko, mupimo wakapetwa ruviri. Senguvo dzaErisha. Padzakawiswa naEria, Erisha akadzinonga akaita mbiri. Akava rudzi serudzi rwekereke naKristu. Kristu akatorwa kukwira kudenga. Mweya mumwechete waive munaKristu uri pakereke nhasi uno, Mweya Mutsvene. Mazviona?
Mudzidzisi wokururama. Luther Wesley nevePentecosti vakamutsiridza kereke vakadzosa zvinhu zvikuru muMagwaro asi vakabva vasiya zvakavanzika zvakawanda zvemuBhaibheri zvisina kuziviswa.
Zvino vatumwa vanomwe vakaonekwa kumuprofita wenguva yekupedzisira vakazivisa Zvisimbiso zvinomwe akapedzisa zvakavanzika zvaive zvisina kuziviswa. Izvi zvakatora mvura yekutanga kana kuti mvura yedzidziso kuiisa muchidanho chakadzama muMagwaro newaini (kusimudzwa kwezaruriro) nemafuta apo Mweya Mutsvene wakatanga kutungamirira vanhu muchokwadi chisingakwanisi kuzarurwa nemakereke.
JOERI 2:24 Mapuriro achazara nezviyo, uye zvisviniro zvichapafuma waini namafuta.
25 Ndichakudzoseraizve makore amakadyirwa nemhashu, negwatakwata, nomupedzachose, nomuteteni, iyo hondo yangu huru yandakatuma pakati penyu.
Mvura yedzidziso, kana Zvisimbiso zvinomwe zvazarurwa, Mwenga waKristu anodzorerwa kudzidziso yekutanga yaitendwa nekereke yekutanga muTestamente Itsva. Munguva yeRima chokwadi cheMagwaro chakadyiwa nezvikamu zvakasiyana siyana zvemweya waantikristu wehunyengeri kupfurikidza dzidziso yenhema, mafungiro evanhu, uye tsika dzechipegani. Zvino bato rekereke rakasimbiswa reRoman Catholic, richitsigirwa nesimba rezvematongerwo enyika remadzimambo eRoma, rakamanikidza munhu wese kuti atevere chimiro chechitendero chavo. Ipapo mweya yemadhimoni yakabva yadzikisira chiitiko chikuru chemutsiridzo chakazorasikirwa nehutungamiri hweMweya Mutsvene, chikabva chawira mukupatsanurana kuva masangano emakereke akasiyana-siyana. Vatungamiri vemakereke vakatanga kutonga masangano avo. Semakumbo emufananidzo waDanieri wemuHedeni wakazopatsanurana kuva zvigunwe zvakawanda. Saka hutungamiri hwevanhu, tsika dzavaNikoraiti, dzakadzikisira hutungamiri hweMweya mukereke.
Muprofita wekupedzisira anodiwa kuti azivise zvakavanzika zveMagwaro, kuti mbeu yenguva yekereke yekupedzisira ive yakafanana nembeu yekutanga yekereke yakadyarwa nevapostora. Ipapo pega ndipo panozokwanisa kuitika goho.
“Izwi remutumwa wechinomwe” rakaparidzwa mumabhuku, makaseti, kana paintaneti kuti ripedzise mvura yedzidziso yekupedzisira.
Kana vanhu vakazvimiririra vachigona kuvhura Bhaibheri, voverenga vonzwisisa, vorarama nekutenda sezvakaitwa nekereke yekutanga, zvino Mutumwa mukuru anoburuka kuna Zvakazarurwa 10, neBhuku yakazarurwa, kuzomutsa vakafa nekushandura miviri yedu isu vanenge vasara, zvinozotiita chikamu chemvura yekupedzisira kana mvura yekukohwa. Kana muviri wako ukasashandurwa, hausi chikamu chegoho.
Asi, rangarirai, kana tikangopinda mumumvuri werufu, “Ndini Rumuko neVupenyu; ndichamumutsa zvakare.” Uye kana Mukuru wemasimba ose aburuka akaisa hoko iyoyo pasi, ipapo, “nguva haizovapo.”
Kana Mutumwa, wekunaZvakazarurwa chitsauko 10, akaisa tsoka yake imwe pamusoro penyika imwe pamusoro pegungwa, nemurarabungu pamusoro pake, Anopika, “Nguva haizovapo zve.” Kana nguva iyi ikasvika, muchamuka kubva pakati pevakafa. Vamwe vose vakarara pakadaro apo, imi muchapinda.
Hama branham vakayananisa Mutumwa uyu nekumutswa kwaRazaro kubva kuvakafa. Hushumiri hwaJesu, paakapindira seMutumwa mukuru Mikaeri, ndehwekumutsa vakafa. Akaratidzira paguva raRazaro kuti ane simba rekuita izvi.
Zvakazarurwa Chitsauko 10 inotaura nezvemvura yekupedzisira inotanga nekumuka kubva kuvakafa.
Vachaonekwa kuvaKrustu vapenyu, asi vachakwana pakati peavo vachadzoserwa pakutenda kwekereke yekutanga sezvavakaita ivo. Uku ndiko kuchava kuedzwa kwekupedzisira kweMwenga anorarama. Tichatenda zvakafanana nezvavakatenda here?
Pachaonana Mwenga anorarama neuyo aive afa, ipapo chikamu chechipiri chemvura yekupedzisira chinobva chaitika, kunova kushandurwa kwemiviri yeMwenga anorarama kubva mukereke yekupedzisira. Panguva iyi Kutinhira kunomwe kwakavanzika kunobva kwareva. Uku ndiko kuedzwa kwechipiri kuMwenga waKristu. Tichanzwanana here neKutinhira kunomwe kwakavanzika uku, togona kukuyananisa neMagwaro? Kana tikagona, kunobva kwatigadzira kuti titorwe tikwire kudenga kubva padavi rinonzi nyika.
BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE CHITSAUKO 10. KUDZORWA KWENGUVA
Zvino rinoti Mwari “achadzorera”. Nguva yaLuther haina kudzorera kereke; yakatanga mutsiridzo. Nguva yaWesley haina kudzorera kereke. Nguva yePentecosti haina kudzorera kereke. Asi Mwari ndiye anofanira kudzorera nekuti haarambe Shoko rake. Uku hakusi kumuka kwekereke; “kudzoserwa kwayo”. Mwari achatora kereke kuidzosera kuPentecosti yekutanga. Zvino tererai kuvhesi 25 rinotiudza kuti nei tichida kudzorerwa. Mhashu, gwatakwata, mupedzachose nomuteteni zvakadya zvese asi mudzi nechikamu chiduku chedavi zvakasara. Asi tinoudzwa kuti zvipuka izvi zvimwechete zvakafanana zvinouya munguva dzakasiyana. Ndizvo chaizvo. Ndizvo mweya waantikristu unoonekwa mumasangano, mapato uye mudzidziso dzenhema mukati menguva dzemakereke. Mudzi iwowo nedavi duku rakasara zvichadzoserwa. Mwari haasi kuzodyara Kereke itsva, asi achadzosera kudyara kwake kwekutanga pambeu yekutanga. Achazviita sezvazvakataurwa muvhesi 23, nedzidziso kana nemvura “yekutanga”.
Kunobva kwatevera mvura yegoho kana kuti kutenda kwekukwira kudenga.
KUDZOSWA KWENGUVA -BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE CHITSAUKO 10
Saka panguva ino tiri pakuzadziswa kwakazara kwaMateo 24:24 “kuti kana zvichibvira vatsaure nevakasanangurwa vo. Nei? Mweya waantikristu uri “muvakazodzwa venhema” wemazuva edu ano ekupedzisira. Vakazodzwa venhema ava vakatouya “Muzita raJesu” vachizviti vakazodzwa naMwari kuti vauye kumazuva ekupedzisira. Ndivo vana Messiasi venhema (vakazodzwa venhema). Vanozviti maprofita. Asi vari pamwechete neShoko raMwari here? Kwete. Vakawedzera kwariri kana kubvisa kwariri. Hakuna anoramba kuti Mweya waMwari unozviratidza muzvipo nemabasa uri pamusoro pavo. Asi saBaramu vose vane hurongwa hwavo, vanoita mhindu dzavo kuitira mari, vanodzidza kuti vave nezvipo, asi vanoramba zvinoreva Shoko kana kuridarikira nekuda kwekutya kuti kugadziriswa nezvinotaura Bhaibheri kunokwanisa kuparadza mukana wavo wekuwana zvizhinji. Asi vanoparidza ruponeso nedzikinuro kupfurikidza simba raMwari, saJudasi, aive nehushumiri akasarudzwa naKristu. Asi nekuti ivo imbeu dzakaipa, vane mweya wakaipa unovashandisa.
Chitendero? Oh mai! Vanokunda vakasanangurwa mukushingaira nekubata kukuru, asi ndevenguva yeRaodikia, kwete vaKristu, nekuti vanotarira kuungana kwevanhu vazhinji, hurongwa hukuru nezviratidzo zvinoyevedza pakati pavo. Vanoparidza Kuuya kweChipiri kwaKristu, asi vachiramba chinangwa chemutumwa muprofita, kunyangwe musimba, zviratidzo uye zaruriro yezvinoreva shoko anovadzima vose. Ah hongu, mweya wenhema uyu uri panyika nhasi wakangoda kuita sewechokwadi, unokwanisa chete kupatsanurwa nekuda kwekurasika kwawo kubva paShoko, uye pese pazvinobatwa zvichirambana neShoko, zvinodzokera pakutaura kumwechete takaratidza kare kuva venhema: “tinowana mhinduro, hatiiwane here? Tinofanira kuva vaMwari.
Makereke ane simba riri pakati nepakati rekugona kudzidzisa Magwaro nekudzosa chokwadi. Luther akadzosa chinhu chikuru chekuda kuponeswa. Wesley akadzidzisa hutsvene nekuparidzira. VePentecositi vakadzidzisa zvipo zveMweya uye rubapatidzo rweMweya Mutsvene.
Asi kukohwa ndipo paunobvisa mbeu dzaibva kubva padavi radzakaberekwa.
Kukohwa kwechokwadi ndiko kukwira kudenga kweMwenga waKristu, Mwari paanobvisa vanhu panyika. Kana akasakubvisa kuenda newe kudenga, unenge usiri chikamu chegoho. Vachakwira kudenga chete ndivo vaya vachashandurwa miviri yavo. Ndihwo hushumiri hweMutumwa Mukuru wekunaZvakazarurwa Chitsauko 10.
Saka pekutanga hushumiri hunoburuka pamuprofita, huchiunzwa nevatumwa vanomwe vasingaonekwe, kuitira mvura yekutanga kana kuti mvura yedzidziso inoenderera mberi kusvika pakuguma mumazuva enzwi rake, rinotaura kwatiri kupfurikidza mabhuku makaseti kana masaisai akasiyana emagetsi, nguva refu mumashure merufu rwake. Zvino vanhu vakagamuchira Shoko- rave kunze kwemasuwo emakereke ese (kunyange makereke ese asingazvizivi izvi vachizviramba zvikuru) – vanodzoserwa kudzidziso yemapostora. Iri ndiro basa remvura yekutanga, kutidzosera pakutenda kwekutanga kwekereke yekutanga.
Zvino mvura yekupedzisira inobva yasangana nemvura yekutanga apo Mutumwa mukuru anouya panyika achimutsa vakafa, kunyanya kubva munguva yekereke yekutanga. Ndipo panobva patanga mvura yekupedzisira.
MATEO 27:50 Zvino Jesu akadanidzira zve nenzwi guru akabudisa mweya wake.
“Akadanidzira nenzwi guru”. Zvakafanana neMutumwa wekunaZvakazarurwa chitsauko 10.
Vakafa vanomutswa munguva yekupedzisira “vachaonekwa nevazhinji” apo vachange vachitsvaga vaya vanotenda zvimwechete nezvavakatenda ivo. Havana kubvira vasimudzira munhu, saka havasi kuzofadzwa neavo vanokudza vanhu. Vachamutswa kuti varindire Kuuya kwaShe, saka havazofadzwi neavo vanoti aShe akatouya. Ndivo vachava mvura yedu yenguva yekupedzisira yedzidziso, tichidzidzira kunatsa kutenda kwedu kubva pakutenda kwavo. Tinofanira kuzoshandura kutenda kwedu totenda zvimwechete navo nekuti tiri kufanirwa kudzoserwa pakutenda kwavo kwekutanga. Zvino pane imwe nguva miviri yevanorarama inoshandurwa vo. Hatina chekutaura pamusoro peizvi. Miviri yedu inoshandurwa kana kusara isina kushandurwa. Ndicho chikamu chinotevera chemvura yekupedzisira sezvo miviri yakashandurwa chete ndiyo inokwanisa kukwira kudenga kubva panyika, sembeu dzinobviswa padavi radzakaberakwa. Kukwira kudenga uku kunosangana maMwari kumakore ndicho chikamu chekupedzisira chemvura yekupedzisira.
Saka hatina chekutaura pamusoro pemvura yekupedzisira. Tinokwanisa chete kudzidziswa nemvura yekutanga yedzidziso. Kana tikafanana zvakanaka nezvakaitwa pakereke yekutanga, tinozowanikwavo munguva yemvura yekupedzisira yegoho.
Kudzidzisa kwagara kunoteverwa nebvunzo kana nekuedzwa. Mvura yekupedzisira ndiyo muedzo, kuedzwa kwekupedzisira. Kana tikakunda, tinobudirira tosiya univhesiti (pasi rino). Kana vatsvene vakamutswa vakaonekwa kwatiri, vachatiedza kuti tionekwe kuti tinotenda zvavakatenda ivo here. Avo vanokunda chete kuedzwa uku ndivo vachashandurwa miviri yavo. Vakakundikana vanofanira kudzokorora kudzidza, asi pasi penguva yakaoma kwazvo yeKutambudzika kukuru ichabvisa zvitendero zvavo zvese zvemakereke avo netsika dzavo yovaita kuti vazvifungire, nekuti vanenge vasisateveri vakuru vemakereke avo kana vafundisi. Kana vapinda munguva yekutambudzika kukuru vachaona kuti vakanyengerwa nevatungamiriri vemakereke avo. Ipapo vanenge vasisafadzwi nevafundisi vavo.
1965 KUDZOSWA KWENGUVA – BHUKU RENGUVA DZEMAKEREKE CHITSAUKO. 10
Yakaita semhinduro yakauya pakatanga vakawanda kutaura nendimi vachiratidzira zvipo zveMweya. Vanhu vakabva vatenda kuti uku ndiko KUDZOSERWA kwaive kwamirirwa kwenguva refu. Kwaive kusiri, nekuti mvura yekupedzisira inokwanisa chete kuuya mumashure memvura yekutanga inova mvura yekudyara kana kuti mvura yeDZIDZISO. Mvura yekupedzisira, ipapo, ndiyo mvura yeKUKOHWA. Izvi zvingave sei zvechokwadi iyo mvura yedzidziso isati yauya? Muprofita nhume aizotumwa kuzoDZIDZISA vanhu nekudzorera moyo yavana kumadzibaba ePentecositi asati auya. Ndizvo zvatinofunga kuti ndiko kudzoserwa saka kugadzirirwa kwekupedzisira kwekukasika kuti tisvike pakukwira kudenga hakusati kwauya. Mairi maive nevasakarurama vachibata mabasa emakomborero eMweya uye achiratidza muMweya mutsvene sezvatinogaronongedza kwamuri. Mairi zvakare maivewo nemweya waSatani sezvo vanhu vaive pasi pehutongi hwakaipa, asi pachiita sepasina aizviona. Zvino, kuratidza kuti zvaive zvisina CHOKWADI, vanhu ava (kunyange zera rechipiri risati ravapo) vakaronga, vakanyora dzidziso dzavo dzisiri muMagwaro vakazviitira ruzhowa sezvakaitwa nemamwe mapoka ese aive pamberi pavo.
Rangarirai, Jesu paaive panyika naJudasi wo. Mumwe nemumwe wavo aibva kumweya wakasiyana, pakufa mumwe memumwe wavo akaenda kunzvimbo yake ega. Mweya waKristu wakazodzoka pamusoro pekereke yechokwadi, mweya waJudasi wakadzoka pamusoro pekereke yenhema.
... Achauya kuzokura nzira yaKristu wechipiri achakusha kuitira mvura yechipiri.
Jesu achava mupatsanuri pakati pemasangano nezvitendero, nekuti achauya kuzotsigira Shoko rake nekutora Mwenga wake pakukwira kudenga.
Muna 1965 akati “Achakusha kuitira mvura yekupedzisira”. Iri raive gore rake rekupedzisira panyika. Saka mvura yekupedzisira haina kuuya hama Branham vachiri panyika.
Pane hushumiri hutatu hwakakosha.
I VAKORINTE 12:28 Mwari wakaisa vamwe pakereke, pakutanga vaapostora, rwechipiri vaporofita, rwechitatu vadzidzisi, tevere vaiti vamabasa esimba, tevere zvipo zvokuporesa, navabatsiri navabati, namarudzi mazhinji endimi.
Vapostora vakanyora Testamente Itsva ndivo vakanyanya kukosha. Vanouya pekutanga. Kwete hama Branham.
Kunobva kwauya maprofita. Ndivo vari pechipiri pamutsetse. Muprofita akakosha chete kana achizivisa zvakavanzika zviri muBhaibheri nenzira inotidzorera kudzidziso yeTestamente Itsva yakaitwa navapostora, vanova vakanyanya kukosha. Mapostora gumi nevaviri vagere vakapoteredza chigaro chaMwari chehushe kudenga sechikamu chevanemakumi maviri nevana. Saka Pauro akakosha kwazvo. Mutumwa uye muprofita. Saka vapostora vagara vanowana kukudzwa kukuru.
VAGARATIA 1:8 Asi kunyange isu, kana mutumwa unobva kudenga, [vatumwa vanomwe] akakuparidzirai imwe Evhangeri, inopesana neyatinokuparidzirai isu [vapostora gumi nevaviri], ngaave wakatukwa.
Vafundisi vanonyangadza zvinhu pavanotora zvakataurwa nehama Branhama vozviisa pachinzvimbo chekutanga. Chero munhu anopikisana nezvakarehwa naPauro nevapostora akatukwa. Izvi zvakaipa kwazvo.
Zvino, hushumiri hwakakosha huri pechitatu ndiko kudzidzisa.
Iyi ndiyo mvura yekutanga kana mvura yedzidziso (mowreh). Mudzidzisi anotora zvakataurwa nehama Branham ozvidzosera kuBhaibheri, oratidza kuti zvaari kutaura zviri kubva muBhaibheri, uye zvinokwanisa kutsigirwa neBhaibheri musingadzokere kumashoko akataurwa nehama Branham. Zvino neizvi chete munobva maziva kuti mune chokwadi nekuti Bhaibheri rakanyorwa nevapostora. Uye zaruriro kana mufananidzo wamunenge munawo mupfungwa dzenyu unenge uchibva kune zvakataurwa nevapostora.
Zvakataurwa nevaprofita zvinobva zvatsigirwa neBhaibheri Shoko rakanyorwa kuti zvitidzosere pakutenda kwenguva yekereke yekutanga.
Parizvino hapana pati pataurwa nezvapasita watinoti mufundisi muvhesi reBhaibheri rekuna Vakorinte vekutanga 12:28.
Vanhu vanotungamirira vakasimudzirwa ndidzo tsika dzavaNikoraiti. Mwari anodzivenga.
II TIMOTIO 4:3 Nokuti nguva ichasvika yavacharamba kutendera dzidziso yakarurama, asi, vachida kufadzwa panzeve dzavo, vachizvivunganidzira vadzidzisi pakuchiva kwavo,
4 vachifuratidza nzeve dzavo pazvokwadi, vachitsaukira kungano
Vafundisi vanozviita sevadzidzisi, vachiudza vanhu zvavanoda kunzwa. Kwete zvakanyorwa muBhaibheri. Kadziva kemashoko akabatwa paitaurwa kanobva kava nheyo dzekutenda dzinobva dzavabvisa kuBhaibheri.
VAROMA 12:7 kana kuri kushumira, ngazvivonekwe pakushumira kwedu; kana kuri kudzidzisa, pakudzidzisa kwedu;
Hushumiri ibasa rakaoma, uye tinofanira kuva nechokwadi kuti takarindira kuna Mwari, kwete kumhanyira kuita zvinodiwa nevanhu kuti tiite pavanovaka makereke avo vachivharira Jesu panze.
Tarisai dzidziso hushumiri hwakakosha. Hwakataurwa pakasiyana nehumwe hushumiri.
57-0105 IMI MUNZWEI
Tarisai. Zvino mwana uyu, achangozvarwa akapihwa mudzidzisi (vazhinji venyu vanoziva tsamba kuvaGaratia), yemudzidzisi kana mufundisi. Mudzidzisi uyu akarera mwana iyeye, achinoudza baba vake nguva dzose kuti mwana aikura sei. Akadzidzisa mwana. Akamurera akakura. Akaramba achizivisa baba vake nguva dzose pamusoro pemwana.
Baba vake vaiuya pano neapo votakura mwana wavo vomutsvoda. Asi vaive munhu aigara akabatikana nebasa, vaisawana nguva yekudzidzisa mwana wavo vega. Vaive vakaita sarudzo, yakanakisa, yaive yakanakisa kuti vakudze mwana wavo, nekuti aive mwanakomana wavo.
Haasi munhuwo zvake ane zvaanoziva anokwanisa kuva mudzidzisi.
60-1211M VASIKANA VANE GUMI NEVANEZANA NEMAKUMI MANA NEVANA EZVURU ZVEMAJUDA
Zvino, izvi zvinoita sedzidziso, ndiri kure kwazvo nekuva mudzidzisi. Asi kudzidzisa ndiko kugona kupatsanura, chipo chakakoshesa muMuviri waKristu.
Dzidziso inorwisa zvinofunga vanhu zvine mbiri, saka inobva yarambwa. Dzidziso inopatsanura zvinofungwa uye maonero evafundisi zvoita kuti vafundisi vaone mudzidzisi wacho semuvengi.
63-0724 MWARI HAADAIDZI MUNHU KUNOTONGWA ASINA KUTANGA AMUYAMBIRA
Mudzidzisi munhu akakosha. Anogara pasi pekuzodza kweMweya okwanisa kutora Shoko oriisa pamwechete kupfurikidza Mweya Mutsvene, izvozvo, mufundisi kana muvhangeri hapana anokwanisa kukwikwidza naye.
Izvi ndizvo zvinoparadza mudzidzisi pamberi pemufundisi. Mudzidzisi anokwanisa kuyananisa zvakataurwa nehama Branham neMagwaro nenzira isingagonekwi nemufundisi. Asi mufundisi anoda iye kuva “mukuru’. Saka haagoni kushandidzana nemunhu anokwanisa kuyananisa dzidziso kumukunda. Saka mudzidzisi anobva asiiwa kana kurambwa.
Asi mukuronga kwaMwari, pasita watinoti mufundisi anofanira kudzidza kubva kumudzidzisi.
Chii chinoita kuti kudzidzisa kuve basa rakaoma uye rinoda kubata kukuru? Anofanira kudzidza Bhaibheri, mharidzo yehama Branham, nhorondo zhinji, kuziva nezvemamiriro enzvimbo, uye mitemo yakakosha yesainzi neasitironomi. Hakuna vazhinji vanoda hushumiri hwakadaro. Ibasa zhinji kwazvo kwavari.
Kunobva kwauya chikamu chakaomarara. Mudzidzisi anofanira kuva nemufananidzo kubva pane zvakataurwa nehama Branham, yatinoti zaruriro. Anofanira kuvhima mufananidzo uyu muBhaibheri nekutsvaga mavhesi akanyorwa akazara muBhaibheri rese, omabatanidza pamwechete ogadzira mufananidzo unooneka kubva muMagwaro.
Zvino kana akavimbika, anofanira kutsvaga mavhesi eBhaibheri uye zvakakosha zvinorwisa tsvagiridzo yake, ozvishandura kusvikira kurwisa kuri kubva kuBhaibheri kwabviswa kuti mavhesi ese ataure nyaya imwechete. Ichi chinhu chinotora nguva refu uye chakaoma kuita.
Akagona kuzviita zvakanaka anobva awana mubairo wekupedzisira. Kurambwa. Nhasi vanhu vanoda kudya kwekukasika kwemateki aweyi. Hapana chavanoda chinovaita kuti vafunge. Saka mhinduro dzavo dzakaita sekuti. “Musatisvote nenhorondo kana zvinhu zvinobva kusainzi. Musandiudze zvichibva mundima dziri muBhaibheri nekuti hazvina kukosha. Chandinoda chete kutaura kushoma kuri nyore kudzidza, uye kuri nyore kushandura kukuisa mune mamwe mafungiro”. Zvekukasika zviri nyore, asi zvisina chazvinovaka mumunhu. Kudya kusina maturo.
Kuita uku hakufi kwakatendera vanhu kuona kuseri kwemhute yekusaziva kwavo uye kusanzwisisa kwavo. Pachasvika nguva yeKutambudzika kukuru muhupenyu hwavo setsunami inopasadza, kukwidibirwa kwavo murima kunobva kwabviswa kwavari.
Kune avo vanorarama nezvinotaurwa neBhaibheri, panoziviswa hushe hwake, vachakwanisa kunzwisisa nekugara naJesu.
MaPilgrimi akazivisa kuti hakuna zvimiro zvemasangano epasi pano.
Vekereke yekutanga vaisangana mudzimba. Izvi zvaive chokwadi muguta reRaodikia.
VAKOROSE 4:15 Ndikwazisirei hama dziri Raodikia, naNimfa, nekereke iri mumba mavo.
Uyu muenzaniso wakanakisa kwatiri, vanorarama munguva yeRaodikia, kuti tiutevere.
Johane Mubapatidzi ndiye aive mukuri wenzira yeKuuya kwekutanga kwaJesu. Mharidzo yaWilliam Branham ndiyo mukuri wenzira yeKuuya kwaJesu kwechipiri.
Ngatitarisei vadzidzi vaJohane vana.
37 Ivavo vadzidzi vaviri, vakamunzwa achitaura (Johane), vakatevera Jesu.
Ava ndivo vaive vadzidzi vaJohane vekutanga.
Kuparidza kwaJohane kwakanongedzera vanhu kuna Jesu, uye vadzidzi vaJohane vaviri ava, vakateerera Johane, vakatevera Jesu.
Vaive vasina kuperera pana Johane semunhu, asi vaive vakaperera kuMunhu Jesu wavainongedzerwa naJohane. Kuparidza kwaWilliam Branham kwainongedzera kuBhaibheri. Vadzidzi vake, vakanzwa achitaura vakanzwisisa zvaainongedzera, vanotevera zvinotaurwa neBhaibheri. Vadzidzi vake havafaniri kuzviwisira kwaari semunhu, vanofanira kuzviwisira kuBhaibheri raakanongedzera kana kuzivisa kwavari.
Zvino kwaive nevamwe vadzidzi vaviri vaive vakazvipira zvakazara kuna Johane zvekuti vakaramba vari kwaari pachinzvimbo chekutevera Jesu. Izvi zvaive zvakanaka sezvo Johane aiparidza chokwadi. Asi, nekuti munhu, Johane akakanganisa zvikuru akarwisa Magwaro nekukakavara kuti Jesu aive ari Messiasi. Zvino vadzidzi vaviri vaJohane ava vakatendawo dzidziso imwechete iyi isiri muMagwaro. Johane paakarwisa Jesu, vadzidzi vaviri ava akatenderera vachitenda zvaitaurwa naJohane zvekunyepa. Vanhu vakadzungaira. Hatina kuzonzwa nezvavo zvakare.
Saka kuchave nevadzidzi vaWilliam Branham vachave vakadzungaira zvekuti vachatenda kudzidziso dzisiri muMagwaro nekuti hama Branham vakakanganisa dzidziso yacho. Vachatenderera zvisina nyadzi vachirwisa Magwaro nekuti pane chakangokanganiswa nehama Branham. Zvakare, vanhu vakadzungaira. Nhorondo ichadzokororeka.
Vadzidzi vaya vakanzwisisa zvakazara hushumiri hwaJohane vakapedzisira vatevera Jesu. Asi vadzidzi vakafadzwa naJohane zvekuti vakaramba vari kwaari vakaguma voramba Jesu.
MATEO 11:2 Zvino Johane, ari mutorongo, wakanga anzwa mabasa aKristu, akatuma shoko navadzidzi vake, vaviri.
3 Achiti kwaari, Ko ndimi iye wakanga achinzi unovuya here kana tichakatarira mumwe?
Vakagara pedyo naJohane zvakanyanya zvekuti havana kukwanisa kuona Jesu waainongedzera. Vanotenda kuMharidzo vakazadzwa zvakanyanya nemashoko akataurwa zvekuti havana kukwanisa kuona Magwaro ainongedzerwa nehama Branham. Nei?
JOHANE 5:35 Iye (Johane) wakanga ari mwenje unopfuta nounovheneka; imi makanga muchida kufara nguva duku muchiedza chake.
Johane aive mwenje unopfuta. Asi vadzidzi vake pavakaswedera pedyo naye vakateewa nehushumiri hwake zvekuti havana zvakawanda zvavakazogona kuona. Saka vakapembera muchiedza chake, mukutaura kwake, mumashoko ake. Zvaive zvakanaka kwekanguvana kusvikira Johane paakataura zvaive zvakaipa.
Kadziva kemashoko akasarudzwa akabatwa paitaura munhu haasi rwizi rwehupenyu.
Johane aive chikwangwani chainongedzera kwaigumira rwendo kunova kuna Jesu.
7 Iye wakavuya kuzopupura, kuti apupurire chiedza, kuti vose vatende naye.
8 Uyo wakanga asati ari icho chiedza, asi wakatumwa kuti apupurire chiedza.
Johane aive asiri chiedza chakazara. Akawedzera chinhu chiduku, asi chakakosha, kuchiedza cheBhaibheri. Asi Jesu aive ndiye Bhaibheri racho rese.
Tinofanira kutarisa kuBhaibheri kupfurikidza zvinoziviswa nezvakataurwa nehama Branham.
Hatitarisi zvavakataura. Zvingori “zvikwangwani”. Tinotarisa rutivi rwunonongedzwa nezvakataurwa ipapo chete ndipo patinokwanisa kuona Jesu achifamba nemapeji eBhaibheri.
Kana maona Jesu achiziviswa muShoko rake, zvino saEria pagomo rekubwinya, hama Branham vanorasikirwa nekukosha kwavo zvichienzaniswa naJesu. Nyeredzi inopfuta haingapenyi kana zuva rikabuda.
JOHANE 3:30 Iye unofanira kukura, asi ini ndinofanira kudukupiswa.
Johane, muprofita mukuru Eria, akapera kukosha muBhaibheri pakasvika Jesu.
Zvakataurwa nehama Branham hazvisi chiedza. Haagoni kuwedzera chero chinhu kuBhaibheri. Anokwanisa chete kuzivisa zvakavanzika zvinoda kuzivikanwa neMwenga kuti agadzirire Kuuya kwaJesu kwechipiri.
Anokwanisa chete kuvakira panheyo dzakateewa naPauro.
11 Nokuti hakunomumwe ungaronga dzimwe nheyo, asi idzo dzakarongwa kare, ndiye Jesu Kristu (Bhaibheri).
Kana mukagara muchifara muri pachikwangwani munenge marasikirwa nechinangwa chakaisirwa chikwangani chacho. Hamufi makasvika kwamunenge muchienda. Chikwangwani handiko kuguma kwerwendo.
Nyeredzi inopenya haisi zuva. Nyeredzi dzese dzinopera simba kana zuva rikabuda.
Kana hama Branham vari nyeredzi yakajeka muhupenyu hwako, zviri kungoreva kuti uchiri muhusiku huzere nerima.